Thayipha i-insulin yesifo sikashukela > Imibuzo
Thayipha isifo sikashukela II
I-Type 2 sikashukela i-insulin iyithuluzi elibalulekile ukuze ugcine amazinga eglucose akho evamile futhi uzivikele ezinkingeni. Kungenzeka ukwenza ngaphandle kwemijovo ye-hormone eyehlisela ushukela ezimweni ezibucayi, kepha hhayi ngesifo sokuqina noma ngesilinganiso esiphakeme. Abaningi besifo sikashukela bathatha isikhathi behlala kumaphilisi futhi benamazinga aphezulu kashukela. Faka i-insulin ukugcina ushukela ujwayelekile, uma kungenjalo kuzoba nezinkinga zesifo sikashukela. Bangakwenza ukhubazeke noma bakuyise ethuneni kusenesikhathi. Ngemazinga kashukela we-8.0 mmol / L nangaphezulu, qala ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2 nge-insulin ngokushesha, njengoba kuchazwe ngezansi.
Thayipha i-insulin yesifo sikashukela: incwadi enemininingwane
Qondisisa ukuthi ukuqala ukwelashwa kwe-insulin akuyona inhlekelele noma ukuphela komhlaba. Ngokuphambene nalokho, imijovo izokwandisa impilo yakho futhi ithuthukise ikhwalithi yayo. Zivikela ekulweni nezinkinga ezinso, emilenzeni nasemehlweni.
Okokuqala, thatha ukuhlolwa kwegazi kwe-C-peptide. Isinqumo sokuthi ngabe sifaka i-insulin yini kuhlobo 2 sikashukela senziwa ngokuya ngemiphumela yako. Uma amanani akho e-C-peptide ephansi, kuzofanela ukuthi ufake umjovo we-insulin okungenani ngezikhathi ze-SARS, ubuthi bokudla nezinye izifo eziyingozi. Iningi leziguli ezisebenzisa irejimeni yezinyathelo ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zikwazi ukuhlala kahle ngaphandle kwemijovo yansuku zonke. Lapho ufika elabhorethri uzothatha ukuhlolwa kwe-C-peptide, ungabheka i-hemoglobin yakho ye-glycated ngasikhathi sinye.
Kunoma ikuphi, jwayela ukwenza imijovo nge-insulin edonsa ngokungenhlungu. Uzomangala ukuthi kulula kanjani. Ngopeni lwesirinji - into efanayo, konke kulula futhi akunabuhlungu. Ikhono lokusebenzisa i-insulin lizoba usizo lapho kufika umkhuhlane obandayo, ubuthi bokudla, noma esinye isimo esibi. Ezikhathini ezinjalo, kungahle kudingekile ukuthi ufake i-insulin okwesikhashana. Ngaphandle kwalokho, isifo sikashukela singakhula impilo yakho yonke.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 eziphathwa nge-insulin zinobunzima:
bahlinzeka ngemithi esezingeni eliphakeme engenisiwe,
abale kahle umthamo,
kala ushukela njalo, gcina idayari nsuku zonke,
hlaziya imiphumela yokwelashwa.
Kepha izinhlungu zokujova akuyona inkinga enkulu, ngoba azikho. Kamuva uzohleka ukwesaba kwakho kwangaphambilini.
Ngemuva kwesikhashana esithile, ngisho nokuphathwa kwe-insulin okungaqondakali kwimithamo ephansi kungangezwa kulezi zimali ngokohlelo olukhethiwe ngamunye. Imithamo yakho ye-insulin izoba ngaphansi kwezikhathi ezingama-3-8 kunaleyo odokotela abasetshenziselwa yona. Ngenxa yalokho, akudingeki ukuthi uhlushwa yimiphumela emibi yokwelashwa kwe-insulin.
Izinhloso nezindlela zokwelapha isifo sikashukela sohlobo 2 ezichazwe kule sayithi cishe ziyehluka ngokuphelele eziqondisweni ezijwayelekile. Kodwa-ke, izindlela zikaDkt Bernstein zosizo, nokwelashwa okujwayelekile akuyona kakhulu, njengoba ubonile. Umgomo wangempela futhi ongafinyeleleka uwukugcina ushukela uzinzile u-4.0-5,5 mmol / L, njengabantu abanempilo. Lokhu kuqinisekisiwe ukuvikela ezinkingeni zesifo sikashukela ezinso, iso, imilenze nezinye izinhlelo zomzimba.
Kungani uhlobo 2 lwesifo sikashukela sinqunywe yi-insulin?
Uma uqala ukubheka nje, asikho isidingo sokujova i-insulin ngohlobo 2 sikashukela. Ngoba izinga laleli hormone egazini leziguli livame ukujwayelekile, noma liphakeme kakhulu. Kodwa-ke, akuyona yonke into elula kakhulu. Iqiniso ngukuthi ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, amasosha omzimba ahlasela amangqamuzana e-beta ama-pancreas akhiqiza i-insulin. Ngeshwa, ukuhlaselwa okunjalo kwenzeka hhayi ngohlobo 1 sikashukela kuphela, kodwa nakuT2DM. Ngenxa yazo, ingxenye ebalulekile yamangqamuzana e-beta angafa.
Izimbangela zesifo sikashukela sohlobo 2 ukukhuluphala, ukudla okungenampilo, nokuphila kokuhlala phansi. Abantu abaningi abaneminyaka ephakathi nendawo nabadala bakhuluphele ngokweqile. Kodwa-ke, akubona bonke abahlakulela isifo sikashukela sohlobo 2.Yini enquma ukuthi ukukhuluphala kuzoshintsha kube ushukela? Ukusuka kusengaphambili lofuzo kuya ekuhlaselweni kwe-autoimmune. Kwesinye isikhathi lokhu kuhlaselwa kukhulu kangangokuba imijovo ye-insulin kuphela engabanxephezela.
Yiziphi izinkomba zoshukela engidinga ukuzishintsha kusuka kumathebhulethi ngiye ku-insulin?
Okokuqala, bheka uhlu lwamaphilisi alimazayo wesifo sikashukela sohlobo 2. Yenqaba ukuzithatha ngokushesha, noma ngabe ushukela wakho ubaliwe. Uma esetshenziswa kahle, imijovo ye-insulin ingakhulisa impilo yakho. Futhi amaphilisi ayingozi ayawanciphisa, noma ngabe izinga leshukela likancipha okwesikhashana.
Okulandelayo, udinga ukubheka ukusebenza koshukela usuku lonke, ngokwesibonelo, phakathi nesonto. Sebenzisa imitha kaningi; ungagcini imichilo yokuhlola.
Izinga lomkhawulo kashukela egazini ngu-6.0-6.5 mmol / L.
Kungavela ukuthi ngamahora athile ushukela wakho uvama ukwedlula leli nani, ngaphandle kokubambelela ngokuqinile ekudleni futhi uthathe umthamo ophelele we-metformin. Lokhu kusho ukuthi amanyikwe awakwazi ukubhekana nomthwalo wethanga. Kuyadingeka ukuyisekela ngokucophelela ngemijovo ye-insulin ngemithamo ephansi ukuze izinkinga zikashukela zingakhuli.
Kaningi kuba nezinkinga noshukela ekuseni esiswini esingenalutho. Ukuze ukwenze kube okujwayelekile, udinga:
Ukudla isidlo sakusihlwa kusihlwa, kuze kube ngu-18,00-19,00
Ebusuku, hlaya i-insulin ende ende.
Amazinga we-glucose nawo akalwa amahora angama-2-3 ngemuva kokudla. Ingaphakanyiswa njalo ngemuva kwesidlo sasekuseni, isidlo sasemini noma sakusihlwa. Kulokhu, udinga ukujova i-insulin ngokushesha (okufishane noma kwe-ultrashort) ngaphambi kwalokhu kudla. Noma ungazama ukujova i-insulin enwetshiwe ekuseni, ngaphezu komjovo owuthatha ebusuku.
Ungavumi ukuthi uphile noshukela 6.0-7.0 mmol / l, futhi nangaphezulu, ngaphezulu! Ngoba ngalezi zinkomba, kuba nezinkinga zesifo sikashukela esingamahlalakhona, kancane kancane. Ngosizo lomjovo, uletha izinkomba zakho ku-3.9-5.5 mmol / L.
Okokuqala udinga ukushintshela ekudleni okuphansi kwe-carb. Umuthi weMetformin uxhunyiwe kuwo. Ngamanani kashukela ka-8.0 mmol / L nangaphezulu, i-insulin kufanele ilimale ngokushesha. Kamuva, yengeze ngamathebhulethi e-metformin ngokukhuphuka kancane kancane komthamo wansuku zonke kuze kufike ekugcineni.
Ngemuva kokuqala kwemijovo, kufanele uqhubeke nokulandela ukudla futhi uthathe i-metformin. Izinga le-glucose kumele ligcinwe ngokuqinile ebangeni le-4.0-5.5 mmol / L, njengabantu abanempilo. Udokotela angakutshela ukuthi ushukela 6.0-8.0 mmol / L ungcono kakhulu. Kepha akusilo iqiniso lokhu, ngoba ngenxa yokuthi isifo sikashukela esingamahlalakhona siyakhula, kancane kancane.
Ngingakwazi yini ukuphuza i-insulin emaphilisi esikhundleni somjovo?
Ngeshwa, i-insulin ibhujiswa emgungwini wesisu ngaphansi kwethonya le-hydrochloric acid nama-enzyme wokugaya. Amathebulethi asebenzayo aqukethe le-hormone awekho. Izinkampani ezenza imithi azenzi ngisho nocwaningo kulokhu.
I-inhalation aerosol ithuthukisiwe. Noma kunjalo, leli thuluzi alikwazi ukuqinisekisa ukunemba komthamo. Ngakho-ke, akufanele isetshenziswe. Izinhlobo zeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ezidla ama-carbohydrate amaningi ziphoqelelwa ukuba zizifakele imithamo emikhulu ye-insulin. Ngeke benze amayunithi we-± 5-10 wesimo sezulu. Kepha kwabanesifo sikashukela abalandela ukudla okune-carb ephansi, leli phutha liphezulu ngendlela engamukeleki. Ingenza ama-50-100% wayo wonke umthamo odingekayo.
Kuze kube manje, azikho ezinye izindlela zangempela zokusebenzisa i-insulin ngaphandle kwemijovo. Siyaphinda futhi ukuthi le mijovo icishe ingezinhlungu. Zama ukuzihlinzeka ngemithi ephezulu kakhulu engeniswayo, futhi ufunde nokuthi ungasibala kanjani isilinganiso. Lapho usuxazulule lezi zinkinga, uzokwazi ukubhekana nemijovo.
Yikuphi insulin okungcono ukuyifaka?
Kuze kube manje, iTresiba ihamba phambili kunazo zonke izinhlobo ezeluliwe ze-insulin. Ngoba isebenza isikhathi eside futhi kahle kakhulu. Kuyasiza ukuguqula ushukela ekuseni ngesisu esingenalutho. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sisha futhi siyabiza. Akunakwenzeka ukuthi uzokwazi ukuyithola mahhala.
I-Levemir neLantus isetshenziswe iminyaka engaphezu kwe-10 futhi basebenze kahle. Uma nje ulandela ukudla okune-carb ephansi bese uzijova ngemithamo ephansi, ebalwe ngokucophelela, hhayi enkulu leyo odokotela abajwayele ukuyisebenzisa.
Ukushintshela ku-Treshiba insulin entsha, yemfashini futhi ebizayo akususi isidingo sokulandela ukudla okune-carb ephansi.
Funda futhi isihloko esithi "Izinhlobo ze-Insulin Nemiphumela Yazo". Qonda ukuthi amalungiselelo amafushane ahluke kanjani ku-ultrashort, kungani kunganconywa ukusebenzisa i-insulin protafan ephakathi.
Ungayikhetha kanjani uhlobo lwe-insulin bese ubala umthamo?
Uma uvame ukuba noshukela omningi ekuseni esiswini esingenalutho, udinga ukuqala ngomjovo we-insulin ende ebusuku. Ngokufunda ushukela okujwayelekile ekuseni esiswini esingenalutho, ungaqala ngokungenisa isidakamizwa esisebenza ngokushesha ngaphambi kokudla. Uhlobo lonyango lwe-insulin luhlu lwezinhlobo ezingama-1-3 ze-insulin, kanye nezinkomba zokuthi mangaki amahora wokuzijova nokuthi imiphi imithamo. Kukhethwa ngawodwana, njengoba sekuqoqiwe imininingwane yezinsuku eziningi ngamandla amakhulu kashukela usuku ngalunye. Isikhathi sesifo, isisindo somzimba wesiguli nezinye izici ezithinta umuzwa we-insulin nazo ziyabhekwa.
Iningi labodokotela litusa uhlobo lomuthi owodwa we-insulin kuwo wonke umuntu onesifo sikashukela, ngaphandle kokucabanga ngezimpawu zokugula kwakhe. Le ndlela ayikwazi ukunikeza imiphumela emihle. Imvamisa, kuthathwa umthamo wokuqala wokulungiswa okude kwamayunithi ayi-10-20 ngosuku. Ezigulini ezilandela ukudla okune-carb ephansi, lo muthi ungaba mkhulu kakhulu futhi ubangele i-hypoglycemia (ushukela wegazi ophansi). Ukuphela kwendlela umuntu akhuthaza yona uDkt Bernstein kanye ne-Endocrin-Patient.Com iwebhusayithi kuyasebenza ngempela.
Kungenzeka yini ukujova i-insulin esebenza isikhathi eside kuphela, ngaphandle kwesifushane?
Imvamisa, ngesifo sikashukela sohlobo 2, udinga ukuqala ngemijovo ye-insulin enwetshiwe futhi unethemba lokuthi izidakamizwa ezisebenza ngokushesha azidingeki. Kuyaqondakala ukuthi isiguli sesivele silandela ukudla okune-carb ephansi futhi sithatha i-metformin.
Ezimweni ezinzima, akunakwenzeka ukwenza ngaphandle kokuphatha i-insulin emfushane ngaphambi kokudla, ngaphezu komjovo we-insulin ende nasekuseni. Uma umzimba wakho weglucose ukhubazeke kakhulu, sebenzisa izinhlobo ezimbili ze-insulin ngasikhathi sinye, ungabi livila. Ungazama ukugijimela namandla okuzivocavoca umzimba. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukunciphisa kakhulu imithamo ye-insulin, noma ngisho nokukhansela imijovo. Funda ngaphezulu ngezansi.
Kukangaki ngosuku udinga ukufaka i-insulin?
Impendulo yalo mbuzo ilukhuni umuntu ngamunye esigulini ngasinye. Iningi labanesifo sikashukela badinga ukufaka umjovo we-insulin ubusuku bonke ukuze basebenzise ushukela wabo ekuseni esiswini esingenalutho. Kodwa-ke, abanye abakudingi lokhu. Esimweni sikashukela esinzima, kungadingeka ukuphatha i-insulin ngokushesha ngaphambi kokudla ngakunye. Ezimweni ezinzima, amanyikwe ngaphandle kwemijovo enza umsebenzi omuhle wokugaya ukudla.
Kuyadingeka ukukala ushukela wegazi nge-glucometer okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku ngeviki:
ekuseni ngesisu esingenalutho
2 noma amahora ama-3 ngemuva kokudla kwasekuseni, kwasemini kanye nakusihlwa,
ebusuku ngaphambi kokulala.
Usengakwazi ukukala ngokushesha ngaphambi kokudla.
Ngokuqoqa lolu lwazi, uzoqonda:
Ngabe udinga imijovo engakanani ye-insulin ngosuku.
Kuthiwani ngomthamo okufanele ube.
Iziphi izinhlobo ze-insulin ozidingayo - ezeluliwe, ezisheshayo, noma zombili ngasikhathi sinye.
Ngemuva kwalokho uzokwandisa noma wehlise umthamo ngokwemiphumela yemijovo edlule. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, kuzocaca ukuthi imiphi imithamo kanye neshedyuli yemijovo efanelekile.
yiziphi izinkomba zoshukela odinga ukufaka umjovo we-insulin, futhi lapho - cha,
yini umthamo omkhulu ovunyelwe ngosuku,
malini i-insulin edingekayo nge-1 XE yama-carbohydrate,
Iyunithi elilodwa linciphisa ushukela wegazi,
ingakanani i-UNIT ye-insulin edingekayo ukunciphisa ushukela nge-1 mmol / l,
kwenzakalani uma ujova umthamo omkhulu (isb. kabili),
ushukela awubi ngemuva komjovo we-insulin - izizathu ezingenzeka,
yiluphi uhlobo lwe-insulin oludingekayo lapho i-acetone ivela kumchamo.
Ngabe isiguli sesifo sikashukela sohlobo 2 singalashwa ngazo zombili i-insulin namaphilisi?
Lokhu kuvame ukwenza lokhu okudingeka ukwenze. Ukulungiselela okuqukethe i-metformin kukhulisa ukuzwela komzimba ku-insulin futhi kusize ekunciphiseni imithamo nemijovo. Khumbula ukuthi umsebenzi wokuzivocavoca usebenza kangcono kaningana kune-metformin. Futhi ukwelashwa okuyinhloko kokulimazeka kwe-glucose metabolism kungukudla okuphansi kwe-carb. Ngaphandle kwayo, i-insulin namaphilisi zisebenza kabi.
Lapha kuzobe kufanelekile ukuphinda uxhumanise uhla lwezidakamizwa ezilimazayo zesifo sikashukela sohlobo 2. Yekani ukuthatha le mithi ngokushesha.
Kufanele kube yini ukondliwa ngemuva kokuba isifo sikashukela sohlobo 2 sesiqaliwe nge-insulin?
Ngemuva kokuthi isifo sikashukela sohlobo 2 sesiqaliwe nge-insulin, kufanele kuqhutshekwe nokudla okune-carb kancane. Le ukuphela kwendlela yokulawula lesi sifo. Abashukela abanesifo sikashukela abazivumela ukuba badle ukudla okwenqatshelwe bayaphoqelelwa ukuthi bajove ngemithamo emikhulu ye-hormone. Lokhu kubangela ukugcwala kushukela wegazi futhi kuhlala kuzizwa kungathandeki. Ukuphakama umthamo, kuba yingozi enkulu ye-hypoglycemia. Futhi, i-insulin ibangela ukwanda kwesisindo somzimba, i-vasospasm, ukugcinwa kwamanzi emzimbeni. Konke lokhu kwandisa umfutho wegazi.
Bukela ividiyo yokuthi amaprotheni adliwayo, amafutha kanye nama-carbohydrate athinta kanjani ushukela wegazi.
Khawulela ama-carbohydrate ekudleni kwakho ukuze unciphise imithamo futhi uvikele imiphumela emibi ebhalwe ngaphezulu.
Yikuphi ukudla okufanele ngikudle ngemuva kokuthi ngiqale ukujova i-insulin kusuka ku-Type 2 sikashukela?
Buyekeza uhlu lokudla olungavunyelwe futhi uyeke ngokuphelele ukukusebenzisa. Ukudla okuvunyelwe. Ayisebenzi nje kuphela, kepha futhi inambitheka futhi iyanelisa. Zama ukungadli ngokweqile. Kodwa-ke, asikho isidingo sokunciphisa umthamo wekhalori futhi uzizwe umuzwa ongapheli wendlala. Ngaphezu kwalokho, kuyingozi.
Umuthi osemthethweni uthi ungakusebenzisa ukudla okungekho emthethweni okugcwala ama-carbohydrate, ukumboza ngemijovo yemithamo ephezulu ye-insulin. Lesi isincomo esibi, asikho isidingo sokusilandela. Ngoba ukondleka okunjalo kuholela ekuxhakazeni ushukela wegazi, ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinzima zesifo sikashukela.
Kuyadingeka ukuthi u-100% ayeke ukusetshenziswa kwemikhiqizo enqatshelwe, engenzi umehluko ngamaholide, izimpelasonto, uhambo lwebhizinisi, uhambo lokuvakasha. Ezigulini ezinesifo sikashukela, ukudla kwe-cyclic low-carb, ikakhulukazi, ukudla kwe-Ducan neTim Ferris, azifanele.
Uma ufuna, ungazama ukulamba ngezikhathi ezithile izinsuku ezingama-1-3 noma ngaphezulu. Noma kunjalo, lokhu akudingekile. Isifo sikashukela sohlobo 2 singalawulwa futhi ushukela ungazinza ngokujwayelekile ngaphandle kokulamba. Ngaphambi kokuzila, thola ukuthi ungayilungisa kanjani i-insulin ngesikhathi sokuzila.
Iziguli eziningi ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zinesifiso sokudla kwe-LCHF ketogenic. Ukushintshela kulokhu kudla kusiza ukunciphisa imithamo ye-insulin, noma ngisho nokuyeka imijovo yansuku zonke. Bukela ividiyo enemininingwane ngokudla ketogenic. Thola ukuthi yini ubuhle baso nezinto ezingalungile. Kule vidiyo, uSergey Kushchenko uchaza ukuthi lokhu kudla kwehluka kanjani kondli olunama-carb aphansi ngokwendlela kaDkt Bernstein. Qonda ukuthi kunengqondo kangakanani ukwehlisa isisindo ngokuguqula indlela odla ngayo. Funda ngokusetshenziswa kokudla keto ukuvikela kanye nokwelashwa komdlavuza.
Yini engabizi kakhulu: imijovo ye-insulin noma amaphilisi?
Womabili ama-insulin namaphilisi awalimazi uma esetshenziswa ngobuhlakani, kodwa kunalokho asize abanesifo sikashukela. Le makhambi avikela iziguli ezinkingeni zokulimazeka kwe-glucose metabolism kanye nempilo ende. Ukusebenziseka kwazo kufakazelwa ucwaningo olukhulu lwesayensi, kanye nokwenza kwansuku zonke.
Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwe-insulin namathebulethi kufanele kube nekhono. Iziguli ezinesifo sikashukela ezikhuthazekile ukuba ziphile isikhathi eside kudingeka zikuqonde kahle ukwelashwa kwazo. Ikakhulu, bukeza uhlu lwezidakamizwa eziyingozi zesifo sikashukela sohlobo 2 bese uyeka ukuzithatha.Suka ekuthatheni amaphilisi ukuwajova nge-insulin uma unezinkomba zalokhu.
Kwenzekani uma umuntu onesifo sikashukela ohlezi e-insulin ephuza ithebhulethi ye-metformin?
I-Metformin ingumuthi owandisa umuzwa we-insulin, wehlisa umthamo odingekayo. Yehlisa umthamo odingekayo we-insulin, lapho imijovo iqina kakhudlwana futhi maningi amathuba okuthi wehlise isisindo. Ngakho-ke, ukuthatha i-metformin kunezinzuzo ezinkulu.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 eziphathwa nge-insulin ngokuvamile zinengqondo ukuthatha i-metformin ngaphezu kwemijovo. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukuthi uqaphele noma yimuphi umphumela kusuka kwiphilisi elilodwa elidakiwe. Ngokwe-theory, ithebhulethi eyodwa ye-metformin nje ethathiwe ingakhulisa ukuzwela kwe-insulin kangangokuba i-hypoglycemia yenzeka (ushukela ophansi). Kodwa-ke, ekusebenzeni lokhu kungenzeka kakhulu.
Ngingakwazi ukufaka i-insulin esikhundleni se-Diabeteson MV, Maninil noma amaphilisi e-Amaryl?
I-Diabeteson MV, iManinil ne-Amaril, kanye nama-analogues abo amaningi - lawa amaphilisi ayingozi. Banciphisa ushukela wegazi okwesikhashana. Kodwa-ke, ngokungafani nemijovo ye-insulin, azidluli isikhathi sempilo yeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kodwa kunalokho zifinyeze isikhathi sayo.
Iziguli ezifuna ukuphila isikhathi eside kufanele zigcine kude nemithi ebhalwe lapha. I-Aerobatics ukuqinisekisa ukuthi izitha zakho ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zithatha amaphilisi ayingozi futhi zilandela ukudla okune-calorie okulinganiselayo. Imibhalo evela kumaphephabhuku ezokwelapha angasiza.
Yini okufanele uyenze uma kungukuthi amaphilisi noma i-insulin ayisizi?
Amaphilisi ayayeka ukusiza lapho i-pancreas iphela ngokuphelele esigulini esinesifo sikashukela sohlobo 2. Ezimweni ezinjalo, lesi sifo empeleni singena kusifo sikashukela sohlobo 1. Isidingo esiphuthumayo sokuqala ukujova i-insulin, kuze kufike lapho ungazi kahle khona.
I-insulin ihlala njalo yehlisela ushukela wegazi, ngaphandle kokuthi ihlungiwe. Ngeshwa, lesi isidakamizwa esibuthaka kakhulu. Iwa kusukela kokungaphezulu okuncane kokushisa kwesitoreji okungaphezu kwemingcele eyamukelekayo, kokubili phezulu naphansi. Futhi, i-insulin esibayeni noma emabhokisini endle kuyingozi ukuqondisa ilanga.
Emazweni e-CIS, ukulimala kwe-insulin sekuphenduke inhlekelele. Kwenzeka hhayi emakethe yamakhemisi kuphela, kodwa nasezitolo ezigcwele, kanye nangezokuhamba kanye nokwenziwa kwamasiko. Iziguli zinethuba eliphezulu kakhulu lokuthenga noma lokuthola i-insulin engasebenzi mahhala. Funda i-athikili "Imithetho Yokulondolozwa Kwe-Insulin" futhi wenze lokho elikushoyo.
Kungani ushukela wegazi ukhuphuka ngisho nangemva kokushintsha kusuka kumaphilisi kuyi-insulin?
Umuntu onesifo sikashukela cishe uyaqhubeka nokudla ukudla okungekho emthethweni. Noma imithamo ye-insulin ayitholayo ayanele. Khumbula ukuthi iziguli ezikhuluphele ezinesifo sikashukela sohlobo 2 azizweli kakhulu ku-insulin. Badinga imithamo ephakeme yaleli hormone ukuthola umphumela wangempela wemijovo.
Kwenzekani uma uyeka ukujova i-insulin?
Ngenxa yokuntuleka kwe-insulin ezimweni ezinzima, izinga le-glucose lingafinyelela ku-14-30 mmol / L. Abantu abanjalo abanesifo sikashukela badinga ukwelashwa okuphuthumayo futhi bafa njalo. Ukungazi kahle okubangelwa ushukela wegazi eliphezulu ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 kubizwa ngokuthi yi-hyperglycemic coma. Kuyabulala. Imvamisa kwenzeka kubantu asebekhulile abanganendaba ukulawula izifo zabo.
Kubafundi abaningi baleli khasi, i-hyperglycemic coma akuyona ingozi. Inkinga yabo ingaba yizinkinga ezingapheli zesifo sikashukela. Khumbula ukuthi bakhula kunoma yiliphi inani lamaglucose egazi ngaphezulu kwe-6.0 mmol / L. Lokhu kulingana nezinga le-hemoglobin le-glycated le-5.8-6.0%. Kuyiqiniso, lapho likhuphuka ushukela, kuba nezinkinga ngokushesha. Kodwa noma izinkomba ze-6.0-7.0, izinqubo ezingezinhle seziqalile.
Thayipha i-insulin yesifo sikashukela: kusuka ezingxoxweni neziguli
Imvamisa kuholela ekufeni ngenxa yokuhlaselwa yikuqala kwenhliziyo noma unhlangothi.Lezi zimbangela zokufa ngokuvamile azihlotshaniswa nesifo sikashukela, ukuze zingabi sibi kakhulu izibalo ezisemthethweni. Kepha empeleni baxhumekile. Kwesinye isifo sikashukela, uhlelo lwezinhliziyo luqinile kangangokuba ukuhlaselwa yinhliziyo noma isifo sohlangothi sokuqala kungenzeka. Lezi ziguli zinesikhathi esanele sokujwayelana nezinkinga zezinso, imilenze kanye namehlo.
Ungakholelwa odokotela abathi ushukela wegazi 6.0-8.0 uphephile. Yebo, abantu abaphilile banamanani anjalo kashukela ngemuva kokudla. Kepha zihlala isikhathi esingadluli imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20, futhi hhayi amahora ambalwa zilandelana.
Ingabe isiguli sohlobo lwe-2 sesifo sikashukela singashintsha okwesikhashana i-insulin?
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zidinga ukuqala zifake i-insulin uma kulandela ukudla okune-carb ephansi futhi zidla i-metformin kungasizi ngokwanele. Izinga likashukela wegazi eliqondisiwe lingama-3.9-5.5 mmol / L ngokuqinile amahora angama-24 ngosuku. Udinga ukuqala ngokujova i-insulin ngemithamo ephansi, uyikhulise kancane kancane kuze kube yilapho izinga le-glucose ligcinwa ngaphakathi kwemikhawulo ebekiwe.
Ukwanda okukhulu kokuzivocavoca umzimba kungasiza ekubuyiseleni imijovo ye-insulin. Ukugijimisa, kanye nokuqeqeshwa ngamandla ejimini noma ekhaya, kuyasiza ukufeza le nhloso. Buza ukuthi kuyini ukusebenza kwe-qi. Ngeshwa, imfundo yenyama ayizisizi zonke izazi zesifo sikashukela ukugxuma kusuka ku-insulin. Kuya ngobukhulu bezinkinga zakho ze-glucose metabolism.
Ngingakwazi yini ukubuya ngisuka e-insulin ngiye amaphilisi? Ungayenza kanjani?
Zama ukusebenzisa umzimba ukuze ukhulise ukuzwela komzimba wakho ku-insulin. Uma uphumelela, khona-ke i-hormone yakho uqobo, ekhiqizwa yi-pancreas, izokwanela ukugcina ushukela uzinzile ngokujwayelekile. Okujwayelekile kubhekiselwa kuzinkomba ezingama-3.9-5.5 mmol / l amahora angama-24 ngosuku.
Izinga le-glucose kufanele libe lejwayelekile:
ubusuku ngaphambi kokulala
Amahora angama-2-3 ngemuva kokudla ngakunye.
Kunconywa ukuhlanganisa ukuqeqeshwa kwe-Cardio nokuzivocavoca ngamandla. Ukugijimisa kuhle kakhulu ekuqiniseni uhlelo lweenhliziyo. Itholakala kalula kunokubhukuda, ukuhamba ngamabhayisekili nokushushuluza. Ungahlanganyela ngempumelelo ekuzivocavoca ngamandla ekhaya nasezindaweni ezingaphandle, ngaphandle kokuya ejimini. Uma uthanda ukudonsa insimbi ejimini, lokho kuzokwenza.
Ukuzivocavoca umzimba njalo Ikakhulu, ivikela ezinkingeni ezihlangene nezinye izifo ezihlobene nobudala.
Ake sithi uphatha ukwandisa ukuzwela komzimba wakho ku-insulin. Kwenzeka ngezinsuku ezejwayelekile ukukwenza ngaphandle kwemijovo. Kodwa-ke, akufanele ulahle ipeni le-insulin, ulibeka eceleni ekhoneni. Ngoba kungadingekile ukuthi uqhubeke okwesikhashana imijovo ngesikhathi somkhuhlane noma ezinye izifo ezithathelwanayo.
Ukutheleleka kwandisa isidingo sesifo sikashukela nge-insulin ngama-30-80%. Ngoba ukusabela kokuvuvukala komzimba kunciphisa ukuzwela kule hormone. Kuze kube yilapho isiguli esinesifo sikashukela sohlobo 2 seseluleme futhi ukuvuvukala kungakadluli, amanyikwe kufanele ivikelwe ikakhulukazi. Uma kunesidingo, sisekele nge-insulin. Gxila kushukela wakho wegazi. Thola ukuthi ngabe badinga ukuqala kabusha imijovo okwesikhashana. Uma ungasinaki lesi seluleko, ngemuva kokubanda okufishane, inkambo yesifo sikashukela ingaba yimbi impilo yakho yonke.
Ingabe ukuzila ukudla kuzosiza ukweqa kusuka kumijovo ye-insulin?
Isifo sikashukela sohlobo 2 sibangelwa ukuthi umzimba wakho awubekezeleli ama-carbohydrate adliwayo, ikakhulukazi lawo acolisisiwe. Ukuthatha ukulawula kwalesi sifo, kufanele usungule uhlelo lokungazisebenzisi ngokuphelele kokudla okungavunyelwe. Uma usukwenzile lokhu, asikho isidingo sokulamba. Ukudla okuvunyelwe kunempilo, kepha kuyinhliziyo futhi kumnandi.Iwebhusayithi i-Endocrin-Patient.Com ngaso sonke isikhathi igcizelela ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zingagcinwa zizinze noshukela wegazi ojwayelekile ngaphandle kokubheka indlala.
Ezinye iziguli zivila kakhulu ukuba zicabange futhi zakhe uhlelo, kepha zifuna ukufeza imiphumela esheshayo ngokuzila ukudla. Ngemuva kokuphuma yindlala, baphinde babe nokulangazelela okungalawulwa kwama-carbohydrate ayingozi. Ukushintshana kwezikhathi zokuzila nokuzidla ngama-carbohydrate kuyindlela eqinisekisiwe yokuthi abanesifo sikashukela basheshe bazithumele ethuneni. Ezimweni ezinzima, i-psychotherapy ingadingeka ukuphula umjikelezo omubi.
Funda ukwelashwa kwesinyathelo ngasinye ngesifo sikashukela sohlobo 2 futhi wenze lokho elikushoyo. Shintshela ekudleni okuphansi kwe-carb. Faka i-metformin, insulin nomsebenzi womzimba kuyo. Ngemuva kokuthi umbuso wakho omusha uzinze, ungazama okunye ukuzila ukudla. Yize lokhu kungadingekile ikakhulukazi. Izinzuzo zokuzila ukudla ziyamangaza. Uzosebenzisa amandla amaningi ukumakhela umkhuba. Esikhundleni salokho, kungcono ukwakha umkhuba wokuzivocavoca njalo.
Ingxenye I. Okudingayo ukwazi ngesifo sikashukela
Ingxenye II. Amasu endabuko
Kusukela ochungechungeni: Isifo sikashukela
Isiqwenga sencwadi esinikeziwe Thayipha isifo sikashukela II. Ungashintshi kanjani ku-insulin (N.A. Danilova, 2010) ihlinzekwe ngumlingani wethu wezincwadi - inkampani yamalitha.
Yisho okuthandayo, kodwa ngaphandle kohambo olufushane olusetshenzisweni lomuntu, ngeke ukwazi ukuchaza izindlela zesifo sikashukela. Futhi udinga ukubazi, ngoba ngokucabanga ngokuqondile ukuthi ukwehluleka kwenzeka kanjani futhi kanjani, ungaqonda futhi uthathe lezo zinyathelo ezisiza ukubuyisela imetabolism engasebenzi kahle. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isifo sikashukela siyingozi ngokwaso - usongo olukhulu empilweni yabantu yizinkinga ezivelayo uma ama-molecule woshukela wamahhala eqhuma amasistimu angaphakathi isikhathi eside. Sizokhuluma ngalokhu.
Isahluko 1. Lokho esiyikho
Ngakho-ke, kusukela esifundweni sesayensi yezinto eziphilayo, sikhumbula ukuthi imizimba yethu iqukethe amathambo, izicubu, isikhumba nezinye izicubu, lapho kwakhiwa khona amasistimu angaphandle nawangaphakathi. Esikoleni, ukwazana ne-anatomy yomuntu kuqala ngesikhumba namathambo emisipha. Sizosishiya lesi sigaba, ngoba kushukela, lezi zinhlelo azijwayelekile kakhulu. Ukugxila kwethu kufanele kube ezinhlelweni zokugaya ukudla, zokujikeleza, izinzwa kanye ne-endocrine. Ukudla - ngoba kungokudla futhi kuyo kuphela lapho sithola ama-carbohydrate (noma ushukela), esidala izinkinga eziningi kakhulu kithi. Amasistimu wokujikeleza nezinzwa yizinto zokuqala okuhloswe ngazo ukuthi ushukela ophezulu "ushabalalise", futhi uhlelo lwe-endocrine luyindlela ngqo lapho ukwahluleka kokuqala kwenzeka.
Kepha umgomo wokuqala wakho konke yisitokisi. Esitokisini, njengaku-micromirror, zonke izinqubo ezenzeka emzimbeni ziyabonakala. Uma kufanele sikhathale, singadli siphele noma sibe novalo, njengoba amaseli eqala ukungabi nawo umsoco, umoya-mpilo, athuthuke kancane, alulame kakhulu, ayeke ukwahlukanisa futhi avuselele. Futhi okuphambene nalokho - ukuthi isitokisi sizizwa kanjani ngokuya ngokuthi sizizwa kanjani.
Iseli lingabizwa ngokuthi isitho esizimele. Njenganoma iyiphi enye into, iseli "liyadla", "liyaphuza", "liyaphefumula", likhula, likhula, liqhubeka nohlobo lwalo lokwehlukaniswa, lungafaki izinto ezinobungozi, bese ekugcineni lufa. Amanye amaseli ayazi nokuthi “ukucabanga,” kepha lokhu kuyinto eyehlukile kunesimiso.
Iseli ngalinye linohlelo oluthile - ukulandelana kwezenzo ezenza liphindaphinde umjikelezo ofanayo ngezikhathi ezithile. Lolu hlelo lubhalwe ngofuzo lwethu, futhi nguyena obhekele ukungabonakali kokubukeka kwethu nokuphendula kwangaphakathi. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, lo mthetho ubhalwe emangqamuzaneni okugaya ukudla ezindongeni zangaphakathi zesisu: ngokushesha lapho ukudla kungena esiswini, aqala ukukhipha i-acid eyisibabule.Uma lokhu kungenzekanga, sonke ngokungangabazeki sizohlushwa ukuqunjelwa futhi ubuntu buzofa ngokushesha, bube uhlobo olwehlukile lokuzalwa.
Kepha kwesinye isikhathi uhlelo luyashayeka, bese kuba sengathi iseli liyahlanya. Isibonelo esivelele kunazo zonke sokuhlanya kokugcina kwamangqamuzana isimila esinomdlavuza, lapho amangqamuzana akhohlwa ngeminye imisebenzi yawo futhi enza into eyodwa kuphela - ukwahlukana okuqhubekayo, okungamisi.
Ukubonakaliswa okuhlukahlukene kokungezwani komzimba kungenye isibonelo sokuthi amaseli (kulokhu amasosha omzimba) “ayahlanya” futhi esikhundleni “sokujaha” abonile (amagciwane, amagciwane noma isikhunta), aqala ukuhlasela omakhelwane bawo.
Kepha njengoba le ncwadi seyinikezwa sikashukela, hhayi kwezinye izifo, ngeke sizijwayeze izimfihlo zokuziqhenya kweseli. Vele siyavuma ukukhumbula ukuthi kungumvelo wamaseli “ukwenza iphutha” nokuthi kwesinye isikhathi aziphatha ngendlela ehlukile kunenhloso yakhe okuhloswe ngayo kusukela ekuzalweni.
Sizobuye sikhulume ngokuthi amangqamuzana “ayiphutha” kanjani kushukela, kodwa ukwenza lokhu kucace futhi kube sobala, kusamele sikhumbule imininingwane eyisisekelo ngokusebenza kwezinye izinhlelo zangaphakathi. Ake siqale ngokujikeleza kwegazi.
Igazi emzimbeni linemisebenzi eminingana eyisisekelo. Ihambisa izakhi nomoya-mpilo kumaseli, ama-leukocytes asakazeka kuwo - abavikeli bomzimba, igazi lihlanza namaseli, lithathe kubo izinto ezingadingekile noma eziyingozi ngemisebenzi yabo ebalulekile.
Ukuze igazi ligeleze yonke indawo ngaphandle kokuvinjwa, imigwaqo emihle - imikhumbi - ibekelwe yona emzimbeni. Akukaze kube nezimoto ezigcwele umgwaqo kule migwaqo - phela, traffic kuyo ngaso sonke isikhathi ihlala yinye futhi akekho owela umuntu.
Njengemigwaqo, imikhumbi ihlukaniswe yimigwaqo ebanzi, ehamba ngesivinini esikhulu - imithambo, imigwaqo ephakathi nobubanzi nejubane eliphakeme - imithambo, nemigwaqo emincane emdaka - ama-capillaries. Imithambo ihambisa igazi lisuka kwenye ingxenye yomzimba iye kwelinye (ngokwesibonelo, lisuka enhliziyweni liye emilenzeni), imithambo iholela futhi isuka ezithweni ezithile, bese ama-capillaries efinyelela kumaseli amancane kakhulu abuyisele igazi emuva.
Uhlelo lokujikeleza lungaqhathaniswa nomuthi ojwayelekile: okokuqala lunesiqu esikhulu (lezi yimithambo yethu yemithi), bese luqala ukuhlukanisa lube ngamagatsha (imithambo) eqhubeka ukuncipha, bese kuba ngamaqabunga ahlangana abe yingqimba eyodwa enomsindo (ama-capillaries). Kunjalo nangemikhumbi yethu - ihlala ihlukana iba yizingcingo, ingena phakathi kwezicubu ngenethiwekhi enhle kangangokuba icishe incibilika kwezicubu zomzimba. Kule grid njalo kwamasekhondi kwehla iconsi legazi esitokisini ngasinye. Futhi-ke inqubo yokubuyisela emuva iyenzeka - kanye ngqo kugridi efanayo (kodwa nakweminye imithambo - ukuze igazi lingashayisani!) Igazi liphinda liqoqeke emithanjeni, bese kuba semithanjeni yokubuyela enhliziyweni.
Ukuqala kokuqala kokugeleza kwegazi kusetha inhliziyo. Kusebenza njengenjini yepiston. Umzuzwana ngamunye, inhliziyo (empeleni, ingumsipha ojwayelekile!) Izinkontileka ezibukhali futhi zidonsa igazi likhiphe izithako. Lapho-ke iyaphumula, ifomu elingaphakathi langaphakathi kuyo, lapho (ngakolunye uhlangothi) ingxenye yegazi ingene khona, njalonjalo ukuze ifinyelele.
Yini enye okudingeka uyazi mayelana nenhliziyo nemithambo yegazi ukuthi bashayela igazi ohlelweni oluvaliwe. Lokho wukuthi, kushiya inhliziyo, igazi ngemithambo lenza inguquko ephelele kuzo zonke izingxenye zomzimba bese libuyela emuva. Uma siqhubeka nesifaniso “somshini,” izikebhe zivaliwe ngethrekhi eyinkimbinkimbi, eyinkimbinkimbi, njengamathrekhi enkundleni yokuqeqesha abagijimayo - noma ngabe bangakanani umthwalo ongaphezulu komzimba, babuyela emgqeni wokuqeda, ovele uphenduke isiqalo.
Kodwa-ke, uhlelo lokujikeleza kwegazi alulona ithrekhi eyodwa ehlanganisiwe, kodwa ezine ngasikhathi sinye. Ihlukaniswe izigaba ezimbili, ezibizwa omncane futhi imijikelezo emikhulu yokujikeleza kwegazi. Lokho wukuthi, imibuthano emibili emincane nemikhulu emibili.Imibuthano emincane imithambo emibili ephuma engxenyeni yesokunene yenhliziyo, ingena izicubu zamaphaphu ngemithambo eyehlayo bese iphinda ihlangana kuqala emithanjeni, bese ingena emithanjeni emibili bese ingena phakathi kwesokunxele senhliziyo.
Ukudlula kwegazi emaphashini kuchazwe ngo-oxygen bese kubuyela enhliziyweni. Manje umsebenzi womzimba ukuletha umoya-mpilo kuwo wonke amanye amaseli. Ngakho-ke, kusukela engxenyeni yesobunxele yenhliziyo, igazi elithuthukisiwe lomoya-mpilo liqala futhi - manje selivele lisemjikelezweni omkhulu wokujikeleza kwegazi. I-artery eyodwa iyishayela - ezingalweni nasekhanda, nenye - phansi, ezithweni zangaphakathi ezitholakala esiswini, nasemilenzeni. Lapho, igazi, elisatshalaliswa emikhunjini ehla njalo, linikeza umoya-mpilo emangqamuzaneni, bese inqubo yokwehlela iyenzeka - iyaqoqa ibuyele enhliziyweni ngeminye imithambo yegazi.
Ohambweni lwalo ngomzimba, igazi libuye lifake uhlelo lokugaya ukudla: imithambo emincane kakhulu engena ngaphakathi kwezindonga zangaphakathi zesisu, i-esophagus namathumbu amunca umsoco ekudleni, bese uwusabalalisa emzimbeni wonke bese uwuthumela esitokisini ngasinye. Kepha ngaphezulu kwalokho ngokuhamba kwesikhathi.
Uhlelo lwesibili olunamagatsha amaningi emzimbeni luhlelo lwezinzwa. Izicubu zemithambo zingena emisipha futhi zifinyelele ebusweni bomzimba, ezingxenyeni ezingaphezulu zesikhumba ngesimo sezinzwa zokuphelisa izinzwa. Uhlelo lwezinzwa lubhekene nezikhanyiso ezinemibandela nezingezona ezimi, imicabango, imizwelo, inkumbulo. Abantu abangahlukaniswa yinkolo eyandayo bathi uhlelo lwezinzwa (kanye nobuchopho) oluyindawo yokugcina umphefumulo womuntu, ngoba kungukuthi luqongelela imininingwane nokuvelayo, kulapho izinkolelo zakhiwa khona futhi lusizwa amaseli ezinzwa ukuthi ngokoqobo kuqhathaniswa nemibono - ke ukuthi empilweni yansuku zonke ibizwa ngokuthi unembeza.
Kepha ake sigoduke kwifilosofi bese sibuyela ekwakhekeni kohlelo lwezinzwa. Sidinga ukwazi le ndaba, ngoba yiwo ngqo amaseli ezinzwa agcina eseyilitshe lokuqala nelenqala likashukela wegazi ophezulu. Iqiniso ukuthi amangqamuzana ezinzwa, ngokungafani nezinye izicubu zomzimba, asebenzisa ushukela ngokuqondile, ngaphandle kosizo lwe-insulin ye-hormone. Futhi lapho sikashukela, ukufinyelela kweglucose kumaseli ajwayelekile kuvaliwe (yingakho kuphakama ushukela wegazi), amangqamuzana ezinzwa azithola emithini enkulu, ethinta kabi ukusebenza kohlelo lonke.
Buyela kumaseli ezinzwa. Igama labo lesayensi izinzwa. I-neuron ngayinye inomzimba, okuphuma kuyo inqubo emfushane neyodwa ende. Ngezinqubo zayo ezimfishane, i-neuron ixhunyiwe ezinkulungwaneni zezinye izinzwa namaseli ajwayelekile. Ngabo ukuya emzimbeni kuya njalo bathola imininingwane ngalokho okwenzeka emzimbeni nasizungezile. Iseli yezinzwa ihlaziya lolu lwazi bese ibika umbono wayo komakhelwane bayo abaseduze nabakude kunqubo ende. Unembile. Ukushintshana kwemininingwane njalo, kuxoxiswwe ngakho konke, ama-neurons ndawonye axazulula zonke izinkinga ezibalulekile zomzimba.
Umsebenzi wama-neurons nawo uhambisana nemicabango, imizwa, okuhlangenwe nakho komuntu, inkumbulo yakhe, amakhono, izici zomlingiswa nokunye okuningi. Ngabe ama-neurons aphatha kanjani ukugcina yonke indawo? Lokhu akumangazi, uma ucabanga ukuthi imvelo inikeze umuntu isipho esingeyona eyikhulu hhayi eyinkulungwane - kunezigidigidi eziyikhulu zazo emzimbeni womuntu! Kuliqiniso, sonke sanikezwa thina kusukela ekuzalweni, asikho iseli elilodwa lezinzwa elisha elikhula kuyo yonke impilo. Ngokuphambene nalokho, ayawa futhi abhubhe.
Ngabe lokhu kusho ukuthi njengoba iminyaka isiba dumbile? Akunjalo ngempela. Yikho nje ukuthi ebuntwaneni sisebenzisa kude nabo bonke ama-neurons. Axhumeke kancane kancane, ngokuqongelelwa kwemininingwane nokutholwa kwamakhono amasha. Futhi iqiniso lokuthi bayafa aliyesabisi. Nsuku zonke silahlekelwa amaseli ezinzwa ezinkulungwane ezingama-40, kepha uma siqhathanisa nezigidigidi eziyikhulu okukhona kuzo uhlelo lwezinzwa, lokhu kulahleka nakho akubonakali, njengokwesakhiwo esiphakeme kakhulu, okusanhlamvu okukodwa kwesihlabathi.
Ukubhekana ngempumelelo nemisebenzi eminingi, ama-neurons ahlelwe ngokukhethekile. Lolu uhlelo lwezinzwa. Kuyo, izidumbu zama-neurons zitholakala emaqungeni obuchopho kanye nensimbi yomgogodla, okwenza lokho okubizwa ngokuthi yimpunga yobuchopho. Lokhu kungenxa yokuthi imizimba yama-neurons ingwevu. Ngokuphambene, izinqubo zamaseli ezinzwa zimhlophe. Ukungena kwabo ebuchosheni kuyabandakanyeka ekwakhekeni kwendaba emhlophe yobuchopho. Zakha nesisekelo semicu yezinzwa ephuma ebuchosheni nasemgogodleni futhi ibe nombala omhlophe.
Esimisweni sezinzwa, i-grey daba itholakala emaqeleni amancane. Kuya ngokuthi yilapho ngamunye wabo etholakala khona, inemithwalo yemfanelo ehlukile. Esikhathini sentambo yomgogodla, ngokwesibonelo, izindaba ezi-grey ziqondisa ukusabela okulula komzimba: kwakha umunwe - ingalo yadonswa emuva, ilanga lavutha - isikhumba saphenduka saba bomvu. Indaba engwevu engaphansi engezansi yobuchopho ilawula umsebenzi wenhliziyo, imithambo yegazi, amaphaphu, isisu. Ubhekele futhi indlala nokoma, izinga lokushisa lomzimba, ukujuluka nokulala. Ngomsebenzi wendaba engwevu yezingxenye zangaphakathi zobuchopho, imizwa yenjabulo, yokwesaba, ukukhathazeka nokunye okuhlangenwe nakho komuntu kuyahambisana.
Ngolu lwazi, manje ungaqonda kalula ukuthi kungani ngokuqukethwe ushukela okuphezulu yonke imisebenzi engenhla ihlupheka: umuntu angaba nezikhathi zokuxakeka noma ukungasebenzi, ingqondo yakhe iba namafu, inkumbulo yakhe iba mbi. Isifo sikashukela sikashukela sihambisana nomonakalo ohlelweni lwezinzwa. Kepha sizokhuluma ngayo yonke imiphumela yembuyiselo enganele yesifo sikashukela esahlukweni esehlukile, kepha okwamanje siyaqhubeka nokukhumbula ukwakheka komzimba wethu.
Uhlelo lokugaya luqala ... ebuchosheni. Kukuyo eduzane nenyakatho ye-pituitary gland lapho kutholakala khona izikhungo zokudla kanye nokwenama. Lapho silambile noma sinephunga elimnandi, isikhungo sokudla siyabangelwa: sinikeza isibonakaliso ngohlelo lwezinzwa, futhi amathe aqala ukukhiqizwa emlonyeni wethu, kanye namajusi okugaya esiswini. Kulokhu, isisu sisaqala ukubonakala ngokufana - "ukukhula" - lokhu kungenxa yokuthi izicubu zakhona ziyahamba futhi zilungiselela ukuthatha nokuxubha ukudla.
Ubuchopho yi-alpha ne-omega yesistimu yokugaya ukudla, ngoba lapho ukugaywa sekuphothuliwe futhi izakhi ziqala ukungena egazini, isikhungo sokugcwala kuso sishaya isinali lokuphela futhi zonke izingxenye zethumbu lesisu zilimaza kancane.
Kepha ngaphambi kokuba kwenzeke izinto eziningi ezithokozisayo. Inqubo yokugaya ngokwayo iqala kusukela lapho sifaka okuthile okudla emlonyeni. Sigaya ukudla ngamazinyo ethu futhi sikuxube ngamathe sisebenzisa ulimi lwethu. Yiyeke! Lokhu kubalulekile - ikakhulukazi kubantu abanesifo sikashukela. Iqiniso ngukuthi ama-carbohydrate akha isisekelo sokudla kwethu aqala ukuwohloka emlonyeni, ngaphansi kwethonya lama-enzymes we-salivary. Ukwephula ama-carbohydrate (ngokungafani namaprotheni), kuyadingeka indawo ene-alkaline, futhi kuyindawo enjalo eyakhiwe emlonyeni. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuhlafuna ukudla ngokucophelela.
By the way, ngesizathu esifanayo, ukuphuza ukudla akunconywa - amanzi anciphisa ukugcwala kwamathe, okusho ukuthi ama-carbohydrate awela phansi kakhulu.
Lapho siginya, ukudla kungena esophagus. I-Medi ayithathi hlangothi kuyo, lapho ukudla kuhamba kanye ne-esophagus esiswini, ama-enzyme amathe aqhubeka nokwenza kwawo - aphula ama-carbohydrate.
Isisu, njengoba sesishilo, isikhwama esakhiwe ngemisipha. Ngesikhathi sokugaya, izicubu zivumelana futhi ziphumule, zixuba njalo nokugaya ukudla. Ukunyakaza okunjalo okuqhubekayo kuyadingeka futhi ukuthi i-hydrochloric acid ekhishwe yizindlala ezindongeni zangaphakathi zesisu ifaka okuqukethwe kwayo ngokulinganayo. IHydrochloric acid iyi-solvent universal, iletha iningi lokudla libe sesimweni se-homogeneous, okuvumela ukuthi iqale ukungena egazini ngemithambo engena ngaphakathi kwezindonga zesisu.
Yilezo zakhi zomzimba ezidingekayo ngamangqamuzana ezingena egazini.Konke okunye kususwa esiswini ngokusebenzisa amathumbu. Kuliqiniso, ukugaya akupheli lapho - ingxenye yokudla iyaqhubeka nokugaywa emathunjini, ngaphansi kwethonya lama enzymes wamathumbu. Uma nje ukudla kudlula kuwo wonke amasongo amathumbu, izakhamzimba (ezingekho kwifomu elihlanganisiwe) ziyaqhubeka nokungena egazini futhi zisakazeka emzimbeni wonke.
Isahluko 2. Isifo sikashukela - ukungalingani kwe-hormonal
Sesivumile kakade ukuthi ngeke sibheke isifo sikashukela njengesifo ngendlela yaso engenacala. Abakwazi ukwelapha ushukela. Ngakho-ke, kunembile kakhulu ukukubona njengesici se-metabolic esibonisa indlela ethile yokuphila. Kepha lona kanye ubucayi obusebuthatheni bomthetho wama-hormonal, futhi umuntu angaqonda inqubo yakhe kuphela ngokukhumbula (noma ukufunda kabusha) uhlelo lwe-endocrine futhi, ikakhulukazi, ukwakheka kwamanyikwe.
Uhlelo lwe-Endocrine namanyikwe
Uhlelo lwe-endocrine lubandakanya izindlala ze-endocrine ezitholakala ezingxenyeni ezihlukene zomzimba (okuwukuthi, izindlala ezithambisa imfihlo - izinto ezikhethekile - kwizitho zangaphakathi zomzimba): i-pituitary, i-thyroid, i-pancreas, izindlala zocansi nabanye. Yonke le mibungu ikhiqiza ama-hormone. Ama-Hormones ayadingeka nje emzimbeni njengezakhamzimba ne-oksijini, athinta izinhlobonhlobo zezinqubo zokuphila - ezinjenge-metabolism namandla, izinqubo zokukhula nokwenziwa kabusha, ushukela wegazi namazinga e-calcium nokunye. Ukuntuleka noma ngokweqile kwanoma iyiphi i-hormone kuholela ekusebenzeni kahle kohlelo lonke.
Isifo sikashukela siwumphumela wokungahambi kahle kwamanyikwe. Itholakala kwesobunxele ngemuva kwesisu, esiswini sangaphezulu futhi ifinyelela ebanzi, isikhundla sayo singakucabanga uma ubamba intende yakho kusukela ohlangothini lwesobunxele ngaphansi kwezimbambo kuya ku-navel. Inezingxenye ezimbili ezizimele: isisindo sayo esiyinhloko, esikhipha ujusi wokugaya (noma we-pancreatic), nesiqholo okuthiwa yi-Langerhans, esibiza kuphela u-1-2% wevolumu yento yonke. Yilezi ziqhingi, ezatholakala ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye yisazi sezokwelapha saseJalimane uLangerhans, ezikhiqiza ama-hormone, kufaka phakathi i-insulin.
Yini i-insulin futhi kungani idingeka, singakwazi ukuqonda uma sikhumbula konke okwashiwo ngenhla. Okokuqala, umzimba wakhiwa amaseli, futhi amaseli adinga umsoco. Okwesibili kungukudla okunomsoco (kufaka noshukela okudingekayo ukuze kubuyiswe amandla) amangqamuzana atholakala egazini. Okwesithathu, ushukela ungena egazini ngenxa yokugaya, kusukela esiswini, lapho kudliwa khona ukudla esikudlayo. Ngamafuphi, siyadla, futhi amaseli ayagcwala.
Kepha kulolu hlelo olulula futhi oluqondakalayo, kunephuzu elilodwa elicashile: i-glucose ukungena esitokisini futhi igqekeze kulo ngokukhululwa kwamandla, idinga umhlahlandlela. Lo mhlahlandlela insulin.
Lesi simo singachazwa ngale ndlela. Cabanga ngekheji njengegumbi elinomnyango ovaliwe. Ukungena egumbini, i-glucose molecule kumele ibe nesikhiye esingayivulela umnyango. I-insulin ye-hormone imane nje iyisihluthulelo esinjalo, ngaphandle kwalokho (onqonqozayo - ungangqongqozi) ngeke ungene egumbini.
Futhi lapha nje, umuntu oyedwa kwabayishumi ushayisa uhlelo - "ulahlekelwe izinkinobho." Kungasiphi isizathu lokhu kwenzeka, namanje akwaziwa ngokugcwele. Omunye ugcizelela enguqulweni yephutha lemvelo eliyizizukulwane (akulona ize ukuthi izingane zabanesifo sikashukela zibe nethuba elingcono lokuphinda ulwazi lwabazali babo kunalabo okhokho babo abangazange bahlangabezane nokwephulwa okunjalo). Umuntu usola inqubo yokuvuvukala noma ezinye izifo zamanyikwe ngakho konke, ngenxa yalokho iziqithana zeLangerhans zichithwa bese ziyeka ukukhiqiza i-insulin.
Noma ngabe kunjani, umphumela uba munye - ushukela uyeka ukungena kumaseli, kepha ngobuningi bawo buqala ukuqwabelana egazini. Okuholela kulokhu - sizobona kungekudala. Okwamanje, sizobhekana nezindlela ezimbili ezahluke ngokuphelele zezinhlobo ezimbili zikashukela.
Uhlobo lokuqala (olwaziwa yibo bonke abantu abanesifo sikashukela) lubizwa ngokuthi yi-insulin-wateabetes mellitus. Ibizwa nangokuthi yi-ISDM. Kungabizwa ngokuthi yisifo sikashukela se-classical, ngoba kusiphinda impela isikimu esichazwe ngenhla - amanyikwe ayekile ukukhipha i-insulin, futhi amaseli "avale" phambi kwe-glucose. Lolu hlobo lokuphazamiseka lubhekwa njenge- "sikashukela sabancane", njengoba libonakala lisesemncane, imvamisa lufika eminyakeni engama-20.
Uhlobo 1 sikashukela aluvamile - 2% kuphela yabantu abatholakala kulo. Amaseli we-pancreatic akhiqiza i-insulin awakwazi ukubuyiselwa - awenziwa kabusha, awakwazi ukuthuthwa kabusha noma ukukhula futhi. Ngakho-ke, ukuphela kwendlela "yokuvula" amaseli we-glucose ukuphathwa kokufakelwa kwe-insulin. Lokhu kungumsebenzi onzima, ngoba i-insulin kufanele ingene ngqo egazini ngokushesha ngaphambi kokudla nasephuzweni elichazwe ngokuqinile. Ngaphandle kwalokho, esikhundleni se-hyperglycemia (ushukela owedlulele egazini), umuntu uzothola i-hypoglycemia (ukuncipha kwayo okubukhali), egcwele ukugcwala nokufa imbala. Kepha ososayensi abakamtholi ngenye indlela. Ngakho-ke, ukukhuluma ngokwenqaba i-insulin kubantu abanohlobo lokuqala lwesifo sikashukela kuyinto elula.
Indaba ehluke ngokuphelele isifo sikashukela sohlobo 2, noma i-mellitus (NIDDM) engaxutshwe nhlobo ne-insulin. Inomshini ohluke ngokuphelele nezinye izindlela zokuthola isinxephezelo. Manje yisikhathi sokukhumbula esasikhuluma ngamaseli namandla abo 'wokuhlanya.' Lapha sibhekene necala elinje - ngesifo sikashukela sohlobo lwesibili, ama-pancreas asebenza ngokujwayelekile futhi ahlala ekhiqiza i-insulin. Kepha iseli "akaboni!" Akaboni ngalutho, futhi lokho! Imemori yakhe yofuzo ikhishwe kuye, futhi iseli liyaqhubeka nokugcina “izivalo” zivaliwe, noma ngabe kungakanani ushukela ocwile kuwo ukhiye we-insulin.
Kuliqiniso, kuleli cala, iminyango ayivalweki ngokuqinile, futhi ushukela ungena kalula kubo. Kungakho umuthi ophambili kuleli cala uwukudla okususelwa ekwenqatsheni "okulula" futhi ikakhulukazi i-carbohydrate ekhanyisiwe (ushukela, ushokoledi kanye nemikhiqizo equkethe) nokusetshenziswa kwama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, adilizwa kancane futhi maningi amathuba okuthi kungene esitokisini, ngaphandle kokudala "izimbotshana zethrafikhi" emnyango.
Usizo lwesibili lwesifo sikashukela sohlobo II izidakamizwa ezikhulisa ukumelana (isb., Susceptibility) samaseli ku-insulin. “Babuyisela” inkumbulo yabo kubo, “balungisa” izikhiye futhi benza umzimba usebenze ngokujwayelekile. Kodwa-ke, ngokuqhubeka kwesikhathi kanye nalolu hlobo lwesifo sikashukela, abantu bangadinga i-insulin yokufakelwa, ngoba kulula kakhulu ukujwayela amaseli kuyo. Njengomthetho, ukuguqukela ku-insulin kwenzeka uma, ngezindlela ezivamile, ushukela wegazi ungasancishiswa. Imvamisa lokhu kungumphumela wesimo sokukhohlisa ngokwakho, ukungahambisani nokudla noma umphumela wezifo ezihlangene.
Akunakwenzeka ukufaka umshuwalense ngokumelene nesifo sikashukela. Futhi akunakwenzeka ukwenqaba imijovo ye-insulin kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1. Kepha uhlobo 2 lwesifo sikashukela (futhi lokhu kutholwa kwenziwa ema-80% ezimo zokutholwa kwesifo sikashukela) kungahle kunxephezelwe indlela yokuphila, ukudla nemithi ekhethekile. Lokho wukuthi, ngakho, kungenzeka futhi kudingekile ukukwenza ngaphandle kwe-insulin. Kwanele ukwazi nokusebenzisa imithetho esizoyiveza engxenyeni yesibili yale ncwadi.
Imiphumela yokuthola isinxephezelo sikashukela segazi esanele
Kepha ngaphambi kokuthi udlulele kumathiphu athile, ake sibheke ukuthi kwenzekani uma unganaki amazinga aphezulu kashukela.
Kulokhu, igazi, njenganoma yimuphi umuntu ophilile, ligcwele ushukela, okuthi, ngenxa yokuntuleka kwe-insulin (uhlobo I sikashukela) noma umphumela waso omubi (uhlobo II sikashukela), alunakungena ngokuphelele noma ngokwengxenye kumaseli. Ngenxa yalokhu, izinga likashukela wegazi liphezulu (i-hyperglycemia), futhi amaseli aqala ukubulawa yindlala futhi athumele amasiginali ngokubandezeleka kwawo.Umzimba ungena kubo ngale ndlela: izitolo ezinoshukela ezivela esibindini ziqala ukukhishwa, amazinga kashukela egazi akhuphuka nangaphezulu, kepha amaseli asasele ngaphandle kokudla. Ngemuva kwalokho ukuhlukaniswa kwamafutha aqoqwe emzimbeni kuqala ngokwakhiwa kwezidumbu ezibizwa nge-ketone - i-acetone, i-beta-hydroxybutyric acid ne-acetaldehyde. Imizimba yeKetone, njengoshukela, iyakwazi nokuhlinzeka ngamaseli ngamandla, kepha lapho ingena egazini, ibhalansi ye-asidi iyaphazamiseka. Umphumela wayo yi-ketoacidosis (i-acidization yemvelo yangaphakathi yomzimba), ukoma nokufa.
Isimo esidabukisayo esichazwe yimi sivame kakhulu ngohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-(yile ndlela isifo sikashukela esashona ngayo ezikhathini ezidlule), kepha noma sinesifo sikashukela esingancikeli i-insulin - ngaphandle kokuthi, uma siphathwa, ngeke ungene enkingeni. Kulokhu, kunengxenye ethile ye-insulin yabo enhle, amangqamuzana athatha ingxenye ethile yeglucose futhi ngeke afike ekhefini, kodwa kunezimpawu zokunukubeza.
Okokuqala, amangqamuzana awakutholi ukondleka okwanele, futhi lokhu kuholela ebuthakathakeni nokukhathala. Okwesibili, umzimba uyazivikela ekucindezelekeni, uvuselela ukuchama ngokweqile bese uqala ukufaka ushukela kumchamo (lokhu kubizwa ngokuthi yi-glucosuria), ngenxa yalokho, izicubu ziba ukomisa, umswakama, usawoti ozuzisayo nesisindo ngokujwayelekile kuyalahleka, kuba khona ukoma okuqhubekayo, nesidingo sokwanda kokuphuza kuze kufike kumalitha ama-6-8 ngosuku, kanti ukuphuma komchamo kuvame ukwenzeka kaningi-ke kube yi-3-4 (polyuria). Okwesithathu, nge-hyperglycemia, amangqamuzana obuchopho, ilensi kanye nezindonga zemithambo yegazi (lezo ezingadingi i-insulin) zidonsa i-glucose ngokweqile, ngenxa yalokho kunomuzwa wokusinda ekhanda, amandla okugxila anzima, ilensi iba ngamafu ushukela ngokweqile, i-acuity ebonakalayo iyancipha , ukuphazamiseka kwemithambo. Ngale ndlela, i-hyperglycemia - umphumela wesifo sikashukela esingalashwa - isiphatha kabuhlungu kathathu.
Ngemiphumela yesikhathi eside yesifo sikashukela esingalashwa, umfutho wegazi ophakeme nokushaya kwenhliziyo kungabizwa ngokuphepha. Yilezi zifo zesibili ezidala ukufa kusenesikhathi phakathi kwabanesifo sikashukela abangayinaki impilo yabo. Izindonga zemithambo yegazi enoshukela wegazi ophakeme njalo ziba buthaka futhi zingasebenzi kahle. Abanaso isikhathi sokuphendula ezinguquko ekuweni kwegazi, okugcwele ukugcwala kwangaphakathi.
Endaweni yesibili imvamisa yokwenzakala ukulimala kwezinso likashukela. Kuyingozi futhi ngoba kuhlala kungabonakali isikhathi eside, ngoba akubangeli ubuhlungu obukhulu noma okunye ukubonakaliswa komtholampilo. Njengomthetho, izibonakaliso zokuqala zokufaka ubuthi emzimbeni ngemikhiqizo yokuqhekeka kweseli engavunyelwe ivela kuphela lapho kungasenakwenzeka ukusindisa izinso. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthi uhlole isimo sohlelo lokuchama okungenani kanye ngonyaka. Inkomba yezinqubo ze-pathological ingaba ukwanda kwengcindezi yegazi, okuqukethwe kwamaprotheni ekuhlaziyeni komchamo, kanye nokwenza mnyama nge-ultrasound yezinso. Kodwa-ke, kwanele ukwazi ukuthi i-hyperglycemia engapheli iyoholela ku-nephropathy, futhi iqaphe izinga likashukela egazini.
Okulandelayo okuvama kakhulu ukungaboni kwesifo sikashukela. Ushintsho lwe-pathological ku-fundus ezimweni eziningi lwenzeka ngemuva kweminyaka engama-5 ukuya kwe-10 ukusuka ekuqaleni kwalesi sifo. Ngezindlela eziningi, izikebhe ezintekenteke nazo kufanele zisolwe - ziyeka ukuhambisa amehlo ngegazi elanele, bese izicubu ziyafa kancane. Akukho phuzu ekwelapheni ubumpofu besifo sikashukela ngaphandle kokunciphisela ushukela wegazi. Kungcono ekuqaleni ukulawula le nkomba futhi ungalethi izinkinga ezinkulu.
Isifo sikashukela kwesinye isikhathi futhi kufanele sibhekane nesifo esifana nesifo sikashukela sikashukela. Lokhu kusethi eyinkimbinkimbi yokuphazamiseka kwe-anatomophysiological, okuthi ezimweni eziphambili kuholele ekunqunyweni kwemilenze.Lesi sifo sihlanganisa nezinkinga ezinkulu ezintathu - ukushona kwamangqamuzana ezinzwa emaphethelweni aphansi (umuntu uzizwa ezinyaweni zikhubazekile), ukwephulwa kokuhlinzekelwa kwegazi okungelona kanye nokutheleleka kwamanxeba amancane. Iqiniso ngukuthi ngokuncipha kokusebenza kwezinhlelo zezinzwa nokujikeleza, isikhumba ezinyaweni sisulwa kalula futhi siqhekeke. Ukutheleleka kungena emanxebeni nasemjondolo, okuthi ngalezi zimo kuqhume ngokushesha umbala omuhle kakhulu. Kwenziwa izilonda ezinde ezingalapheki, ubuthi obuqala lapho bufaka ubuthi kuwo wonke umzimba.
Sibhale kuhlu lwezinkinga eziphambili ezibangelwa yisifo sikashukela, uma ungenzi imizamo yokunciphisa ushukela wegazi. Kepha konke lokhu kuthambekela kungagwenywa uma ulalela izeluleko zochwepheshe.
Isahluko 3. Isexwayiso - ababhuqisi!
Kunesinye futhi isihloko esingeke sahluleke ukuheha ngaso umfundi. Naphezu kweqiniso lokuthi isifo sikashukela kwesinye isikhathi sihlukaniswe izinhlobo ezimbili, empeleni ziningi izinhlobo zako. Ukuthi nje akuvamile. Kuze kube muva nje, bekukholelwa ukuthi isifo sikashukela sohlobo II sikhula ngokukhethekile kubantu abadala. Kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje, lesi simo - ikakhulukazi ngokugula kwezingane - sesishintshe kakhulu. Phambilini bekukholelwa ukuthi lesi sifo ngisemncane ngamacala angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kwezifo eziyikhulu, siwuhlobo lwesifo sikashukela, kodwa, njengoba kwenzeka ngenxa yezifundo ezinemininingwane eminingi, lo mbono unephutha. Ngokuya ngobuzwe, i-8-45% yamacala kashukela ezinganeni angokunye izinhlobo:
• ukuthayipha i-II yesifo sikashukela ebuntwaneni, okungeyona eyokutholwa futhi okubangelwa yindlela yokuphila engenampilo yesizukulwane sethu esisha - ukungabi nokuzivocavoca umzimba, ukudla okuningana kanye nokukhuluphala. Kuyaziwa ukuthi izingane zama-Afrika-amaMelika, amaLatin America, kanye nabahlali baseCaucasus bathambekele kulolu hlobo lwalesi sifo. Izingane ezinesifo sikashukela sohlobo II ziyelashwa, njengabantu abadala, ngokudla namaphilisi,
• kuhlobo lwe-modi-hlobo lwesifo sikashukela - isifo esidla lubi sesifo sikashukela esenzeka ebuntwaneni, ebusheni nobusha futhi siba nesifo sikashukela sohlobo II. Kuyelashwa, njengasekuqaleni, ngokudla nezidakamizwa zomlomo,
• Isifo sikashukela se-Neonatal ngenxa yezinkinga zofuzo ezizalwe kabusha. Igama elithi "neonatal" lisho ubudala besiguli - imvamisa ingane ingamaviki ayisithupha okuphila. Ekuqaleni, isiguli esincane sinazo zonke izimpawu ze-IDDM (ukomisa, ukwehla ngokushesha kwesisindo, ushukela wegazi ophakeme kakhulu), futhi ingane ilashwa nge-insulin izinyanga ezintathu kuya kwezine. Kube sekufika isikhathi sokuxolelwa, esingahlala iminyaka engama-4-25 (okungukuthi, kube yisikhathi eside ngokumangazayo), futhi ngalesi sikhathi ingane (noma umuntu omdala) akadingi i-insulin, noma amaphilisi, noma ukudla - unesifo sikashukela bebengeke. Kepha isifo sikashukela sibuyela ezikhathini ezibucayi zempilo, ngokuxinwa okukhulu, isifo esithathelwanayo nokukhulelwa - lapho isidingo somzimba we-insulin sisikhulu kakhulu. Isifo sikashukela siyabuya - futhi kaningi sihamba ngesimo esibucayi ... Ukwehluka okungajwayelekile kwesifo! Kuvele amacala ayisishiyagalombili eRussia, kwathi ayisishiyagalolunye e-USA.
Sigxila ngqo kulezi zinhlobonhlobo ezihlukile zesifo sikashukela sezingane, ngoba zinesifiso esikhulu kubelaphi abagaxekile. I-mellitus eyisifo sikashukela esiyisifo esingelapheki namuhla, edonsela izingwegwe eziningi okuthiwa zingezendlela yokuselapha ngokuphelele kulesi sifo. Lezi zilaleli azibandakanyi ama-psychics, ama-shamans ne-yogis kuphela, kepha futhi nodokotela abaqinisekisiwe ababazali babo okuyizisulu zezingane ezigulayo, ikakhulukazi ngesikhathi sokuqala kokugula lapho ubaba nonina bengasazuli isimo, bashaqekile, futhi bakulungele ukukhokha noma iyiphi imali ukuze basindiswe ingane yakhe.Kumakhanda afunda ngemfundo yezokwelapha aqondayo umsuka walolu daba, ingane enesifo sikashukela sohlobo II i-godend: kungenzeka ukwelapha isiguli esiningi, okungukuthi, "simsuse" ku-insulin. Siyanxusa ukuthi uqaphele kakhulu ezimweni ezinjalo - ungadinwa kakhulu ukubonana nochwepheshe abaningana, ufunde izincwadi, futhi usondele kuzo zonke iziphakamiso. Akukhathalekile ukuthi uma uhlukana nemali eyengeziwe - kubi kakhulu uma ingane iba yimbi ngenxa yalokho “kwelashwa” okunjalo.
Amagama ambalwa ngaphezulu mayelana nezigwaca
Ngaphandle kokuthi into yokuqala odokotela babantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 abaxwayisa ngayo ukuthi ayilapheki, abantu bayaqhubeka nethemba lesimangaliso. Lokhu kusizwa ngamahemuhemu ahlukahlukene okwelapha okumangalisayo nokuphelele. Ukuze ungaweli ama-scammers, kufanele uqonde ukuthi la mahlebezi avelaphi nokuthi yimaphi amacala angokoqobo aqukethe izisekelo zawo.
Kaningi, la mahlebezi ahambisana nombono ongaqondile ngesifo sikashukela njengokuwukuphela kwesifo esiphumela ushukela wegazi ophezulu. Isiguli esike sabhekana nalolu hlobo lwenkinga sithola ukuxilongwa kwesifo sikashukela sesibili ngenxa yesifo se-thyroid, kepha igama elithi "sekondari" lisuka engqondweni yakhe - noma ekuxoshweni kwabangane nezihlobo zakhe. Okusele nje yiligama elikhunjulwa kahle sikashukela. Ngemuva kwalokho lesi sifo esingaphansi siyelapheka, bese kuthi isifo sikashukela sihambisane nakho - isifo sikashukela sesibili. Futhi isiguli sethu sangaphambili siqala ukuphikisana nokuthi manje, bathi, wayenesifo sikashukela, kepha walulama. Ungezwa izindaba ezithakazelisa ngokwengeziwe ezivela kwabesifazane: ngenyanga yesishiyagalombili yokukhulelwa, ngagula nginesifo sikashukela, futhi emasontweni amathathu ngibelethile konke kwaphela ngokuphelele.
Kepha sesivele sijwayele ukuhlukaniswa kwezifo zikashukela ezichazwe ngenhla, okusho ukuthi siyawuqonda umehluko phakathi kwesifo sikashukela sesibili nesokuqala. Uhlobo lokuqala I nesifo sikashukela sohlobo II aselapheki. Lokhu kusho ukuthi emisebenzini yezokwelapha awekho amacala aziwayo okususa isifo sikashukela esiyinhloko. Uma sithatha esinye futhi isifo esibi kakhulu - umdlavuza, okuwukuthi, ulwazi ngezimangaliso ezimbalwa, kodwa ezinokwethenjelwa, lapho isimila esingasebenzi singavumbuka ngokushesha bese umuntu eqhubeka ephila. Lokhu kwenzeka ngaphansi kwethonya lezimo, esingalisebenzisa ngokuqokwa: ukuhlanganiswa kwemithombo yangaphakathi kanye nokuvikelwa komzimba ezimweni zokweqisa. Ngeke sibe yi-Orthodox futhi sivume ukuthi kwezinye izimo ukufakwa okunjalo kwenzeka ngaphansi kwethonya lemilingo. Yebo bekunjalo! Mhlawumbe kwakungu - ngamathumba anomdlavuza nezinye izifo. Kodwa ngesifo sikashukela esiyinhloko, amaqhinga anjalo awasebenzi. Akukaze kwenzeke kunoma yisiphi isikhathi lapho umzimba wethu ukwazi ukuvuselela kabusha amaseli we-beta noma "ukulungisa" amangqamuzana e-insulin angonakele.
Kodwa-ke, kunamahlebezi athi ama-psychics kanye nochwepheshe kwezokwelapha zasekwelapha abaphulukisa isifo sikashukela esiyisisekelo baphokophela ukusakazeka phakathi kweziguli. Abelaphi abathintekayo bangahlukaniswa ngezigaba ezimbili: ochwepheshe abathembekile kanye namaqhubu. Uchwepheshe owazi ubukhulu bamandla akhe namakhono akhe, oqonda uhlobo lwesifo, akasoze akuthembisa ukuthi uzokuphilisa kwisifo sikashukela. Kungaletha ukukhululeka okuthile kulesi sifo, kuzinzise izinga likashukela - ngokuhlanganisa “imithombo yangaphakathi nokuzivikela” okufanayo okungaqondakali. Umphumela ubonakala ikakhulukazi esimweni sikashukela esinzima, lapho isimo sesiguli siguquka phakathi kwe-hypo- ne-hyperglycemia. Kepha ukudambisa ushukela akusiyo ikhambi laso; leli qiniso kumele lamukelwe ngesibindi futhi liqonde.
Ngokuqondene nomsebenzi wabaphilisi abanobunzima, kuyabulala isiguli sikashukela. Kwesinye isikhathi laba belaphi badinga ukuthi isiguli senqabe ukuthatha izidakamizwa ezinciphisa ushukela noma i-insulin, ngoba lokhu "kuyaphazamisa" ukwelashwa kwabo. Endabeni yesifo sikashukela esincike ku-insulin, imiphumela yalesi sinyathelo ibuhlungu kakhulu: ukuvela kwe-ketoacidosis, kulandele isifo sikashukela nokufa.Amacala anjalo ayaqoshwa futhi, ngeshwa, avela njalo ngonyaka.
Akuyona ingozi, kepha futhi ezimweni eziningi ingaphumeleli, amacala ngukufakwa kwezithasiselo zokudla ezahlukahlukene kubantu abanesifo sikashukela. I-BAA iyisengezo sokudla. Futhi inhloso yawo kuphela ukwengeza ama-micronutrients angavamile ekudleni kwansuku zonke, esikuthola ngokudla. Eqinisweni, ukulimala okuvela kwizithasiselo zokudla akufanele kube, kodwa ukunamathisela ukubaluleka kubo njengomuthi noma, ngaphezu kwalokho, ukwelashwa okuyisimangaliso, akukufanele.
Khumbula ukuthi izithasiselo zokudla, njenge-herbalife, musa ukudlula isitifiketi sezempilo. Kepha lezi zengezo zisekude kubo bonke futhi azihlali zinobungozi ngaso sonke isikhathi, futhi asiluleki abanesifo sikashukela ukuba bazithathe. Kungenzeka zingalimazi impilo yakho, kepha zizokhipha isikhwama sakho. Esikhundleni salokho, zithenge i-glucometer, uthenge njalo imichilo yokuhlola, bese ubheka ushukela wakho ukuthola isinxephezelo. Izinzuzo ezilapha azinakuphikwa. Nasi isibonelo esisodwa nje: abaneshukela abaningi bathanda amaswidi, bangajabuli ngokungaphatheki kahle nangoshukela omningi, bese bephula ukudla kwabo ngokuzivumela ukuba badle ucezwana lekhekhe. Kungani ungadli uma ulimale i-insulin ekuseni? Kepha imitha izokhombisa ukuthi ngemuva kwalesi siqeshana sekhekhe, ushukela wakho usukhuphukele ku-18 mmol / l, futhi ngokuzayo uzokucabangisisa ngaphambi kokudla leli khekhe elingathandeki!
Ngakho-ke, ngeke sithembele ezimangalisweni, kuma-herbalife, emilangeni nasezinkingeni zezengqondo futhi siphendukele ezintweni zangempela, okugeza nokuzivocavoca, i-acupuncture ne-acupuncture, i-homeopathy kanye nomuthi we-herbal, amavithamini kanye namaminerali. Onke la mathuluzi ayaziwa kusukela ezikhathini zasendulo futhi aletha inzuzo engabazeki. Zingahlukaniswa ngamaqembu amabili: izidakamizwa ezisehlisa ushukela wegazi (ngokwesibonelo, i-tincture yeqabunga le-blueberry), nezidakamizwa ezingathinti i-glucose, kepha zikhuthaza imetabolism futhi zinenzuzo emithanjeni yegazi nokusebenza kwezitho ezahlukahlukene.
Umsebenzi wesayensi wanamuhla ufunde kabanzi izindlela zesifo sikashukela. Kubukeka sengathi lesi sifo sinye futhi siyafana, futhi sihluke ngohlobo olulodwa. Kepha empeleni, bakhula ngezindlela ezihluke ngokuphelele.
Njengoba sekushiwo ngenhla, izinhlobo zokuqala nesibili zesifo sikashukela zivame ukuhlangana nazo, ezahlukahluka ngokwazo enkambisweni yokuthuthuka, izimbangela, amandla wesifundo, isithombe somtholampilo, ngokulandelana, kanye namaqhinga wezokwelapha.
Ukuqonda ukuthi izindlela zokuthuthukisa izifo zihluka kanjani, kufanele uqonde umgomo wokufaka ushukela ezingeni lamaselula
IGlucose ngamandla angena emzimbeni womuntu kanye nokudla. Ngemuva kokuthi ivele kumaseli, i-cleavage yayo iyabonakala, izinqubo ze-oxidative ziyenziwa, futhi ukusetshenziswa kwenzeka kwezicubu ezithambile.
"Ukudlula" emalungeni eseli, ushukela udinga umqhubi.
Futhi kulokhu, yi-insulin ye-hormone, ekhiqizwa yi-pancreas. Ikakhulu, ihlanganiswa namaseli we-pancreatic beta.
Ngemuva kokuthi i-insulin ingene egazini, futhi okuqukethwe kuyo kugcinwa ngezinga elithile. Futhi lapho ukudla kufika, ushukela usuphuziwe, bese ungena ohlelweni lokujikeleza. Umsebenzi wawo ophambili ukuhlinzeka umzimba ngamandla ekusebenzeni okuphelele kwazo zonke izitho nezinhlelo zangaphakathi.
I-glucose ayikwazi ukungena odongeni lweseli ngokwayo ngenxa yezici zayo ezihlelekile, ngoba i-molecule isindayo.
Futhi, yi-insulin eyenza ulwelwesi luvunyelwe, ngenxa yalokho ushukela ungena ngokukhululekile kulo.
Ngokwolwazi olungenhla, kungenzeka ukuthi ufinyelele esiphethweni esinengqondo sokuthi ngokuntuleka kwehomoni iseli lihlala “lilambile”, okuholela ekuqhubekeni kwesifo esimnandi.
Uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela sincike kuma-hormone, futhi ukugxilwa kwe-insulin kungokwehla kakhulu ngaphansi kwethonya lezinto ezingezinhle.
Okokuqala nje isakhi sofuzo.Ososayensi bakubeke kwacaca ukuthi uchungechunge oluthile lwezakhi zofuzo lungadluliselwa kumuntu, okuthi, ngaphansi kwethonya lezimo ezilimazayo, 'lungavuka,' oluholela ekuqaleni kwalesi sifo.
Isifo sikashukela isifo sikashukela singakhula ngaphansi kwethonya lezinto ezinjalo:
Ukwephulwa kokusebenza kwamanyikwe, ukwakheka kwesimila sesitho sangaphakathi, ukulimala kwaso.
Ukutheleleka ngegciwane, izifo ze-autoimmune.
Imiphumela enobuthi emzimbeni.
Esikhathini esiningi samacala, akuyona into eyodwa eholela ekuqhakambisweni kwalesi sifo, kodwa eziningana ngasikhathi sinye. Uhlobo lokuqala lwe-pathology luncike ngqo ekukhiqizweni kwehomoni, ngakho-ke ibizwa ngokuthi i-insulin-kuncike.
Ngokuvamile, isifo sikashukela sitholakala ebuntwaneni noma esemncane. Uma kutholakala ukugula, isiguli sinqunywa ngokushesha nge-insulin. Umthamo kanye nemvamisa yokusetshenziswa kunconyelwa ngawodwana.
Ukwethulwa kwe-insulin kuthuthukisa inhlala-kahle yesiguli, futhi kuvumela umzimba womuntu ukufeza zonke izinqubo ezidingekayo ze-metabolic ngokugcwele. Noma kunjalo, kukhona ama-nuances athile:
Lawula ushukela emzimbeni nsuku zonke.
Ukubalwa ngokucophelela komthamo we-hormone.
Ukuphathwa njalo kwe-insulin kuholela ekushintsheni kwe-atrophic kwezicubu zomzimba endaweni yomjovo.
Ngokuphikisana nesizinda sikashukela, amasosha omzimba ayancipha ezigulini, ngakho-ke amathuba okuba nezifo ezithathelwanayo ayanda.
Inkinga yalolu hlobo lwesifo ukuthi iningi lezingane nentsha ehlushwa yiso. Umbono wabo obonayo awunakukhubazeka, ukuphazamiseka kwehomoni kuyabhekwa, okuthe kungaholela ekubambezelweni kwesikhathi sokuthomba.
Ukuphathwa kwehomoni okungapheli kuyisidingo esibalulekile esenza inhlala-kahle, kepha ngakolunye uhlangothi, ibeka umngcele wenkululeko yokusebenza.
Uhlobo lwesibili sikashukela lunendlela ehluke ngokuphelele yokuthuthuka. Uma uhlobo lokuqala lwe-pathology lususelwa kumthelela wangaphandle kanye nesimo somzimba sokuntuleka kwezinto zokusebenza ezingafakwanga, uhlobo lwesibili luhluke kakhulu.
Njengomthetho, lolu hlobo lwesifo sikashukela lubonakala ngokuhamba kancane, ngenxa yalokho kutholakala kakhulu kubantu ngemuva kweminyaka engama-35 ubudala. Izici ezibikezela kusengaphambili yilezi: ukukhuluphala, ukucindezelwa, ukudla okungenampilo, impilo yokuhlala phansi.
Uhlobo 2 sikashukela i-mellitus yisifo sikashukela esingancikeli i-insulin, esibonakaliswa yisimo se-hyperglycemic, okuwumphumela wokuphazamiseka kokukhiqizwa kwe-insulin. Ukugxila kwe-glucose ephezulu kwenzeka ngenxa yokuhlanganiswa kokungasebenzi kahle okuthile emzimbeni womuntu.
Ngokungafani nohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, enale ndlela yokugula, i-hormone emzimbeni yanele, kepha ukutholakala kwamaseli emiphumeleni yayo kuncishisiwe.
Ngenxa yalokhu, i-glucose ayikwazi ukungena kumaseli, okuholela “endlekeni” yawo, kepha ushukela awunyamalali ndawo, uqongelela egazini, okuholela esimweni se-hypoglycemic.
Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwamanyikwe kuyaphazamiseka, kuqala ukuhlanganisa inani elikhudlwana lehomoni ukuze kunxephezelwe ukubanjwa kwamaselula okuncane.
Njengomthetho, esigabeni esinjalo, udokotela utusa ukubuyekezwa okuhle kokudla kwakhe, anikeze ukudla okunempilo, uhlobo oluthile losuku. Kwezemidlalo kubekiwe okusiza ukukhulisa ukuzwela kwamangqamuzana kwi-hormone.
Uma ukwelashwa okunjalo kungaphumeleli, isinyathelo esilandelayo ukunikeza amaphilisi okwehlisa ushukela wegazi. Okokuqala, kunikezwa ikhambi elilodwa, ngemuva kwalokho bangancoma ukuhlanganiswa kwezidakamizwa eziningana ezivela emaqenjini ahlukahlukene.
Ngenkambo ende yesifo sikashukela nokusebenza ngokweqile kwe-pancreatic, okuhambisana nokukhiqizwa kwenani elikhulu le-insulin, ukuncipha kwesitho sangaphakathi kungabandakanywa, ngenxa yalokho kube nokushoda kwama-hormone.
Kulokhu, ukuphela kwendlela ukuphatha i-insulin. Okusho ukuthi, kukhethwa amaqhinga wokwelashwa, njengakuhlobo lokuqala lwesifo sikashukela.
Kanye nalokhu, iziguli eziningi zicabanga ukuthi uhlobo oluthile lwesifo sikashukela seluguqukele kolunye. Ikakhulu, ukuguqulwa kohlobo lwe-2 kuhlobo lwe-1 kwenzeka. Kepha lokhu akunjalo.
Ngabe uhlobo 2 lwesifo sikashukela lungangena kuhlobo lokuqala?
Ngakho-ke, ingabe konke okufanayo, uhlobo 2 sikashukela lungangena ohlotsheni lokuqala? Ukusebenza kwezokwelapha kukhombisa ukuthi lokhu akunakwenzeka. Ngeshwa, lokhu akwenzi kube lula ezigulini.
Uma ama-pancreas elahlekelwa ukusebenza kwawo ngenxa yomthwalo oqhubekayo ngokweqile, khona-ke uhlobo lwesibili lwesifo alunakubalwa. Ukubeka ngamanye amagama, hhayi kuphela ukuthi izicubu ezithambile zilahlekelwa umuzwa wazo we-hormone, futhi akukho-insulin eyanele emzimbeni.
Kulokhu, kuvela ukuthi ukuphela kwendlela yokugcina imisebenzi ebalulekile yesiguli ukujova nge-hormone. Njengoba umkhuba ukhombisa, kuphela ezimeni ezihlukile lapho bengasebenza khona njengesinyathelo sesikhashana.
Ebuningini bezithombe zemitholampilo, uma ngabe i-insulin ibekwe ngesikhathi sohlobo lwesibili lwalesi sifo, isiguli kufanele senze imijovo kukho konke impilo yaso.
Isifo sikashukela sohlobo 1 saziwa ngokushoda kwama-hormone okuphelele emzimbeni womuntu. Okusho ukuthi, amaseli we-pancreatic awakhiqizi i-insulin. Kulokhu, imijovo ye-insulin iyadingeka ngenxa yezizathu zempilo.
Kepha ngohlobo lwesibili lwesifo, ukuntuleka kwe-insulin kuyabonakala, okungukuthi, i-insulin yanele, kepha amaseli awakuboni. Yikuphi okuholela ekwandeni kokuhlungwa kwe-glucose emzimbeni.
Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi uhlobo lwesibili sikashukela alunakungena kuhlobo lokuqala lwesifo.
Ngaphandle kwamagama afanayo, ama-pathologies ayahlukahluka ezakhiweni zokuthuthuka, amandla enkambo, kanye namaqhinga wokwelapha.
Uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela lwenzeka ngoba amangqamuzana e-pancreatic "ahlasela" amasosha abo omzimba, okuholela ekuncipheni kokukhiqizwa kwe-insulin, okuholela ekwandeni kokuqukethwe ushukela emzimbeni.
Uhlobo lwesibili lukhula kancane uma luqhathaniswa nesifo sikashukela sohlobo 1. Ama-receptors amangqamuzana alahlekelwa umuzwa wawo wangaphambili we-insulin kancane, futhi leli qiniso liholela eqinisweni lokuthi ushukela wegazi uyanqwabelana.
Phezu kokuthi iqiniso lokuthi imbangela ngqo eholela ekuthuthukisweni kwalezi zifo ayikakamiswa, ososayensi banciphise uhla lwezinto eziholela ekutholakaleni kwalezi zifo.
Izici ezihlukile ngokuya ngembangela yokwenzeka:
Kukholakala ukuthi izinto eziphambili ezihambisana nokwakhiwa kohlobo lwesibili ukukhuluphala, impilo yokuhlala nokudla okungenampilo. Futhi ngohlobo 1, i-pathology ibangelwa ukubhujiswa kwe-autoimmune kwamaseli we-pancreatic, futhi lokhu kungaba ngumphumela wokutheleleka ngegciwane (i-rubella).
Ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, kungenzeka ukuthi ifa kungenzeka. Kukholelwa ukuthi ngobuningi bamacala, izingane zithola amafa kubazali bobabili. Futhi, uhlobo 2 lunobudlelwano obuqinile bendawo nomlando womndeni.
Yize kunezici ezithile ezingahlukile, lezi zifo zinomphumela ojwayelekile - lokhu ngukuthuthuka kwezinkinga ezinkulu.
Njengamanje, ayikho indlela yokwelapha ngokuphelele uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela. Kodwa-ke, ososayensi bacabanga ngezinzuzo ezingaba khona zenhlanganisela yama-immunosuppressants nezidakamizwa ezikhulisa i-gastrin, okuholela ekubuyiselweni komsebenzi we-pancreatic.
Uma le ndlela entsha yokuhumushela "empilweni", bekuzovumela abantu abanesifo sikashukela ukuba balahle i-insulin unomphela.
Ngokuqondene nohlobo lwesibili, ayikho futhi indlela ezokwelapha isiguli unomphela.Ukuhambisana nazo zonke izincomo zikadokotela, ukwelashwa okwanele kusiza ukunxephezela lesi sifo, kodwa hhayi ukwelapha.
Ngokusekelwe kokushiwo ngenhla, kungaphethwa ngokuthi uhlobo olulodwa lwesifo sikashukela alukwazi ukuthatha enye indlela. Kodwa akukho okuguqukayo kusuka kuleli qiniso, ngoba i-T1DM ne-T2DM zigcwele izinkinga, futhi lama-pathologies kumele alawulwe kuze kube sekupheleni kwempilo. Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zesifo sikashukela kuvidiyo ekulesi sihloko.
Izici zokwelashwa kwe-insulin ngesikhathi
Ukwelashwa kwe-insulin yesikhashana kunqunyelwe iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ezinenkinga enkulu ye-concomitant pathology (i-pneumonia enzima, i-myocardial infarction, njll.), Lapho kuqashwa ngokucophelela kakhulu i-glucose yegazi ukuze kusheshe kululame. Noma kulezo zimo lapho isiguli sehluleka khona ukuthatha amaphilisi okwesikhashana (ukutheleleka kwamathumbu asebusweni, kusengaphambili futhi ngemuva kokuhlinzwa, ikakhulukazi emgodini wesisu, njll.).
Ukugula okungathi sína kukhulisa isidingo se-insulin emzimbeni womuntu. Cishe uke wezwa nge-hyperglycemia ecindezelayo lapho kukhuphuka ushukela wegazi kumuntu ngaphandle kwesifo sikashukela ngesikhathi somkhuhlane noma okunye ukugula okwenzeka ngomkhuhlane omkhulu kanye / noma ukudakwa.
Odokotela bakhuluma nge-hyperglycemia ecindezelayo enamazinga kashukela egazini ngenhla kwe-7.8 mmol / L ezigulini ezisezibhedlela ngenxa yezifo ezahlukahlukene. Ngokusho kocwaningo, iziguli ezingama-31% ezisezigcemeni zokwelashwa futhi zisuka kuma-44 ziye kuma-80% eziguli ezisezigcemeni ezine-postoperative kanye nasezindaweni ezinakekela abaguli kakhulu zenyuse amazinga kashukela egazini, kanti ama-80% azo phambilini ayengenasifo sikashukela. Iziguli ezinjengalezi zingaqala ukuphatha i-insulin ngaphakathi emzimbeni noma ngokuzimele kuze kube isimo sinxephezelwe. Ngasikhathi sinye, odokotela abasitholi ngokushesha isifo sikashukela, kepha qapha isiguli.
Uma ene-hemoglobin ephezulu ye-glycated high (HbA1c ngaphezulu kuka-6.5%), ekhombisa ukwanda kwe-glucose ezinyangeni ezi-3 ezedlule, futhi neglucose yegazi ayenzi ngendlela evamile ngesikhathi sokululama, khona-ke kutholakala ukuthi unesifo sikashukela bese kunikezwa okunye ukwelashwa. Kulokhu, uma kuwukuthi isifo sikashukela sohlobo 2, amaphilisi anganciphisa ushukela angaqalwa noma i-insulin ingaqhubeka - konke kuya ngezifo ezihlangene. Kodwa lokhu akusho ukuthi ukusebenza noma isenzo sodokotela sabangela ushukela, njengoba iziguli zethu zivame ukuveza ("bangeze ushukela ...", njll.) Kubonisa nje ukuthi isiphetho sani. Kepha sizokhuluma ngalokhu ngokuhamba kwesikhathi.
Ngakho-ke, uma umuntu onesifo sikashukela sohlobo lwe-2 eba nesifo esibi, izinqolobane zakhe ze-insulin zingase zingabi namandla okuhlinzeka ngesidingo esengeziwe ekulweni nengcindezi, futhi ngokushesha uzodluliselwa ekwelashweni kwe-insulin, noma ngabe wayengayidingi i-insulin ngaphambili. Imvamisa, ngemuva kokululama, isiguli siqala ukuphuza amaphilisi futhi. Uma, ngokwesibonelo, ehlinzwa esiswini sakhe, khona-ke uzokwelulekwa ukuthi aqhubeke nokuphatha i-insulin, noma ngabe ukugcinwa kwakhe kokuvikela insulin kugcinwa. Umthamo wesidakamizwa uzoba mncane.
Ukwelashwa kwe-insulin okuqhubekayo
Kumele kukhunjulwe ukuthi isifo sikashukela sohlobo 2 yisifo esiqhubekayo, lapho amandla amaseli we-pancreatic beta ukukhiqiza i-insulin ancipha kancane. Ngakho-ke, umthamo wezidakamizwa uhlala ushintsha njalo, uvame ukubhekela phezulu, kancane kancane ufinyelela ezingeni eliphakeme elibekezelelwa lapho imiphumela emibi yamathebulethi iqala ukubusa umphumela wabo omuhle (ukwehlisa ushukela). Lapho-ke kuyadingeka ukushintshela ekwelashweni kwe-insulin, futhi kuzovele kungapheli, kuphela umthamo kanye nohlobo lwe-insulin therapy olungashintsha. Kuliqiniso, kukhona iziguli ezinjalo isikhathi eside, iminyaka, zingadla ekudleni noma kumthamo omncane wezidakamizwa futhi zinxeshezelwe kahle. Lokhu kungaba, uma isifo sikashukela sohlobo 2 sitholakale kusenesikhathi futhi umsebenzi we-beta-cell ulondolozwe kahle, uma isiguli sikwazile ukwehlisa isisindo, siqapha indlela esidla ngayo bese sihamba kakhulu, esiza ekuthuthukiseni ama-pancreas - ngamanye amagama, uma i-insulin yakho ingachithiwe ihlukile ukudla okuyingozi.
Noma mhlawumbe isiguli besingenaso isifo sikashukela esisobala, kepha kwakukhona i-prediabetes noma i-hyperglycemia ecindezelayo (bheka ngenhla) futhi odokotela bashesha ukwenza ukuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 2. Futhi njengoba isifo sikashukela sangempela singalashwa, kunzima ukususa isifo esivele sivele. Kumuntu onjalo, ushukela wegazi unokuvuka amahlandla ambalwa ngonyaka ngokumelene nesizinda sokucindezela noma ukugula, futhi kwezinye izikhathi ushukela uvamile. Futhi, umthamo wezidakamizwa ezinciphisa ushukela ungancishiswa ezigulini esezikhulile eziqala ukudla okuncane, zehlise isisindo, njengoba abanye bethi, “yoma”, isidingo sabo se-insulin siyancipha futhi ngisho nokwelashwa kukashukela kukhanselwe ngokuphelele. Kepha ngobuningi bamacala, umthamo wezidakamizwa uvame ukwanda kancane kancane.
UKUQALA KOKU-INSULIN THERAPY
Njengoba ngike ngaphawula, ukwelashwa kwe-insulin yesifo sikashukela sohlobo 2 kuvame ukunqunywa emva kweminyaka engama-5 kuye kwaba yisikhathi sokuxilongwa. Udokotela onolwazi, lapho ebona isiguli ngisho nokuxilongwa “okusha”, angabona ngokunembile ukuthi uzodinga ukwelashwa kwe-insulin ngokushesha kangakanani. Kuya ngesigaba lapho isifo sikashukela satholakala khona. Uma i-glucose yegazi kanye ne-HbA1c ngesikhathi sokuxilongwa kungaphakeme kakhulu (ushukela ofinyelela ku-8-10 - 10 mmol / L, HbA1c kuze kufike ku-7-7,5%), lokhu kusho ukuthi izindawo ezigcina i-insulin zisalondoloziwe futhi isiguli sizokwazi ukuphuza amaphilisi isikhathi eside. Futhi uma i-glucose yegazi ingaphezulu kwe-10 mmol / l, kukhona iminonjana ye-acetone kumchamo, khona-ke eminyakeni emihlanu ezayo isiguli singadinga i-insulin. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-insulin ayinayo imiphumela emibi ekusebenzeni kwezitho zangaphakathi. “Umphumela” wayo kuphela yi-hypoglycemia (ukwehla kweshukela egazini), okwenzeka uma kuphakanyiswa umthamo okweqile we-insulin noma uma ungadli kahle. Ezigulini eziqeqeshiwe, i-hypoglycemia iyivelakancane kakhulu.!
Kwenzeka ukuthi isiguli esinesifo sikashukela sohlobo 2, noma singenazifo ezihlobene, sinqunywa ngokushesha ukwelashwa kwe-insulin, njengakuhlobo lokuqala. Ngeshwa, lokhu akuvamile. Lokhu kungenxa yokuthi uhlobo 2 lwesifo sikashukela lukhula kancane kancane, umuntu angaqaphela umlomo owomile, ukuchama kaningi iminyaka eminingana, kepha ungahlangananga nodokotela ngezizathu ezahlukahlukene. Izimali zomuntu zokukhiqizwa kwe-insulin yakhe ziqediwe ngokuphelele, futhi angaya esibhedlela lapho ushukela wegazi esedlula ama-20 mmol / l, i-acetone itholakala umchamo (inkomba yokuthi kukhona inkinga enkulu - i-ketoacidosis). Okusho ukuthi, konke kuhamba ngokwesimo sesifo sikashukela sohlobo 1 futhi kunzima odokotela ukubona ukuthi hlobo luni lwesifo sikashukela. Kulesi simo, ezinye izivivinyo ezingeziwe (amasosha omzimba ukuya kumaseli we-beta) nomlando ophelele osiza usizo. Futhi-ke kuvela ukuthi isiguli sikhuluphele isikhathi eside, cishe eminyakeni engama-5-7 eyedlule sitshelwe okokuqala emtholampilo ukuthi ushukela wegazi ukhuphuka kancane (ukuqala kwesifo sikashukela). Kepha akazange anamathele noma yikuphi ukubaluleka kulokhu; akazange aphile kanzima njengakuqala.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kwaba kubi kakhulu: ubuthakathaka obungapheli, isisindo esilahlekile, njll. Le ndaba ejwayelekile. Ngokuvamile, uma isiguli esiphelele sikashukela sohlobo 2 siqala ukunciphisa umzimba ngaphandle kwesizathu (ukungalandeli ukudla), lokhu kuwuphawu lokwehla kwamandla omsebenzi we-pancreatic. Sonke siyazi ngokuhlangenwe nakho ukuthi kunzima kangakanani ukwehlisa isisindo emabangeni okuqala esifo sikashukela, lapho isitolo se-beta-cell sigcinwa. Kepha uma umuntu onesifo sikashukela sohlobo 2 ephelelwa yisisindo, noshukela usakhula, manje yisikhathi se-insulin! Uma isiguli esinesifo sikashukela sohlobo 2 sinqunywa masinyane i-insulin, ngokweqiniso kunethuba lokukhanselwa kwayo esikhathini esizayo, uma okungenani ezinye izinsalela zomzimba zokugcinwa kokufihlwa kwe-insulin yazo zigcinwa. Kumele kukhunjulwe ukuthi i-insulin ayisona isidakamizwa, ayiyimilutha.
Ngokuphambene nalokho, ngokubhekisisa kahle ushukela wegazi ngokumelene nemvelaphi yokwelashwa kwe-insulin, amaseli we-pancreatic beta, uma esalondoloziwe, "angaphumula" bese eqala ukusebenza futhi. Ungesabi i-insulin - udinga ukunxephezela ushukela ku-insulin, ugcine ushukela omuhle izinyanga eziningana, kuthi-ke, ngemuva kokukhuluma nodokotela wakho, ungazama ukukhansela i-insulin.Lokhu kungaphansi kwesimo sokuqapha njalo ushukela wegazi ekhaya nge-glucometer, ukuze kuthi uma kwenzeka kukhuphuka ushukela, ngokushesha ubuyele ku-insulin. Futhi uma i-pancreas yakho isasebenza, izoqala ukukhiqiza i-insulin ngamandla avuselelwe. Kulula kakhulu ukubheka ukuthi kukhona ushukela omuhle ngaphandle kwe-insulin. Kepha, ngeshwa, ekuzenzeni lokhu akwenzeki njalo. Ngoba ukuqedwa kwe-insulin akusho ukuthi ukuqedwa kokuxilongwa uqobo. Futhi iziguli zethu, esekholelwe ekunqobeni kokuqala okungathi sína kokushukela kwazo ngosizo lomjovo we-insulin, zingena kuzo zonke izimo ezibucayi, njengoba zisho, ziphindela empilweni yazo yangaphambili, isitayela sokudla, njll. Kungakho sithi lolu hlobo lwesifo sikashukela se-2 kufanele sitholakale kakhulu ngangokunokwenzeka. ngaphambili, ngenkathi ukwelashwa akuyona inkimbinkimbi. Wonke umuntu uyaqonda ukuthi impilo ene-insulin iba nzima ngokwengeziwe - udinga ukulawula ushukela wegazi kaningi, gcina ukudla okuqinile, njll. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngenxephezelo yesifo sikashukela nokuvimbela izinkinga zayo ezinkulu, akukho lutho olungcono kunokuba kusungulwe i-insulin. I-insulin isindisa izigidi zezimpilo futhi ithuthukise izinga lempilo yabantu abanesifo sikashukela .. Sizokhuluma ngezinhlobo zokwelapha i-insulin ngesifo sikashukela sohlobo 2 kumagazini olandelayo wephephabhuku.